August 2016 | Language Century Language Century
3:07 AM C-Text , Chinese
လောကကြီးမှာ နာမည်တူ မရှား၊ လူတူ မရှားဆိုတာ သင်လက်ခံသလား။ ဒီပို့စ်လေးက သင့်ကို သက်သေပြပေးနိုင်ပါတယ်။
你 能 认 出 这 张 图 上 的 人 是 谁 吗 ？
ဒီပုံထဲကလူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သင် ခွဲခြားနိုင်သလား။
你 会 说 ：当 然 了 ，这 是 美 国 总 统 奥 巴 马。
သိပ်သိတာပေါ့၊ ဒါက အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမားပေါ့လို့ သင် ပြောပါလိမ့်မယ်။
但 图 上 的 人 其 实 不 是 真 的 奥 巴 马 哦 ！
ဒါပေမယ့် ပုံထဲက လူဟာ တကယ်တော့ အိုဘားမားအစစ် မဟုတ်ပါဘူး။
他 是 一 个 29 岁 的 中 国 小 伙 子 。
သူက အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် တရုတ်လူငယ် တစ်ယောက်ပါ။
不 但 长 得 像 ，还 会 学 他 的 动 作 和 表 情 。
ရုပ်ချင်းဆင်ရုံတင်မက၊ သူ ( အိုဘားမား ) ရဲ့ အမူအရာနဲ့ ဟန်ပန်တွေကိုပါ အတုယူထားသေးတယ်။
如 果 能 让 这 两 个 奥 巴 马 见 面 ，应 该 会 很 好 玩 吧 ！
တကယ်လို့ ဒီ အိုဘားမားနှစ်ယောက်သာ ဆုံတွေ့နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်၊ အရမ်းကို ရယ်စရာကောင်းနေမှာပဲနော်။
[ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်တွင် ထည့်ပေးထားပါသည် ]
1. 你〔nǐ〕မင်း။ ခင်ဗျား။ နင်
2. 能〔néng〕... နိုင်သည်
3. 认出〔rènchū〕မှတ်မိသည်။ ခွဲခြားနိုင်သည်
4. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
5. 张〔zhāng〕... စောင်။ ရွက်
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က
10. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
12. 吗〔ma〕လား။ သလား
13. 会〔huì〕... တတ်သည်။ လိမ့်မယ်
14. 说〔shuō〕 ပြောသည်
15. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
16. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
21. 其实〔qíshí〕တကယ်တော့။ အမှန်တော့
22. 不〔bù〕မ ( အငြင်း)
27. 29岁〔èr shí jiǔ suì〕အသက် ၂၉ နှစ်
30. 不但〔búdàn〕... ရုံသာမက
32. 得〔de〕... တာ
34. 还〔hái〕... သေးသည်
36. 动作〔dòngzuò〕အပြုအမူ။ ပြုမူဆောင်ရွက်သည်
37. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
38. 表情〔biǎoqíng〕ဟန်ပန်။ ဟန်အမူအရာပြသည်
40. 让〔ràng〕... စေသည်
41. 两个〔liǎngge〕 နှစ်ယောက်
43. 应该〔yīnggāi〕... သင့်သည်
45. 好玩〔hǎowán〕စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော။ ရယ်စရာကောင်းသော
လောကကွီးမှာ နာမညျတူ မရှား၊ လူတူ မရှားဆိုတာ သငျလကျခံသလား။ ဒီပို့ဈလေးက သငျ့ကို သကျသပွေပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီပုံထဲကလူ ဘယျသူလဲဆိုတာ သငျ ခှဲခွားနိုငျသလား။
သိပျသိတာပေါ့၊ ဒါက အမရေိကနျ သမ်မတ အိုဘာမားပေါ့လို့ သငျ ပွောပါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေယျ့ ပုံထဲက လူဟာ တကယျတော့ အိုဘားမားအစဈ မဟုတျပါဘူး။
သူက အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ တရုတျလူငယျ တဈယောကျပါ။
ရုပျခငျြးဆငျရုံတငျမက၊ သူ ( အိုဘားမား ) ရဲ့ အမူအရာနဲ့ ဟနျပနျတှကေိုပါ အတုယူထားသေးတယျ။
တကယျလို့ ဒီ အိုဘားမားနှဈယောကျသာ ဆုံတှနေို့ငျကွမယျဆိုရငျ၊ အရမျးကို ရယျစရာကောငျးနမှောပဲနျော။
[ ဗီဒီယိုဖိုငျကို အောကျတှငျ ထညျ့ပေးထားပါသညျ ]
1. 你〔nǐ〕မငျး။ ခငျဗြား။ နငျ
2. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
3. 认出〔rènchū〕မှတျမိသညျ။ ခှဲခွားနိုငျသညျ
5. 张〔zhāng〕... စောငျ။ ရှကျ
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က
10. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
13. 会〔huì〕... တတျသညျ။ လိမျ့မယျ
14. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
15. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
16. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
21. 其实〔qíshí〕တကယျတော့။ အမှနျတော့
22. 不〔bù〕မ ( အငွငျး)
27. 29岁〔èr shí jiǔ suì〕အသကျ ၂၉ နှဈ
30. 不但〔búdàn〕... ရုံသာမက
34. 还〔hái〕... သေးသညျ
36. 动作〔dòngzuò〕အပွုအမူ။ ပွုမူဆောငျရှကျသညျ
37. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
38. 表情〔biǎoqíng〕ဟနျပနျ။ ဟနျအမူအရာပွသညျ
40. 让〔ràng〕... စသေညျ
41. 两个〔liǎngge〕 နှဈယောကျ
43. 应该〔yīnggāi〕... သငျ့သညျ
45. 好玩〔hǎowán〕စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးသော။ ရယျစရာကောငျးသော
တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက် ဥပဒေ။
2:42 AM C-Text , Chinese
တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရဟာ လူဦးရေကို ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက် ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ တစ်အိမ်ထောင် ကလေးနှစ်ယာက်ယူလို့ ရနေပါပြီ။
自 从 1980 年 ，中 国 的 家 庭 只 能 生 一 个 小 孩 。
၁၉၈၀-ပြည့်နှစ်ကတည်းက စပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံက အိမ်ထောင်စုတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ပဲ ယူလို့ရကြပါတယ်။ (တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ယောက် ဥပဒေအရ)
因 此 ，中 国 的 年 轻 人 都 是 独 生 子 女 。
ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်နိုင်ငံက လူငယ်တွေ အားလုံးဟာ တစ်ဦးတည်းသော သားတွေ၊ တစ်ဦးတည်းသော သမီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
这 个 决 定 让 中 国 的 人 口 慢 慢 地 增 长 ，但 是 也 出 现 了 一 些 问 题 。
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေကို တဖြည်းဖြည်းချင်းသာ တိုးပွားလာစေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတချို့လည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
2015 年 ，50 岁 以 上 的 人 已 经 占 中 国 总 人 口 的 30 % 。
၂၀၁၅-ခုနှစ်မှာ၊ အသက် ငါးဆယ်ကျော်သူတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ စုစုပေါင်း လူဦးရေရဲ့ ၃၀% ထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
老 年 人 比 年 轻 人 多 。
သက်ကြီးပိုင်း (လူဦးရေ) က လူငယ် (လူဦးရေ) ထက် ပိုများလာပါတယ်။
另 外 ，有 很 多 家 庭 喜 欢 男 孩 ，不 喜 欢 女 孩 。
ဒါ့အပြင်၊ မိသားစု အများစုက သားယောင်္ကျားလေးကို သဘောကျပြီး၊ သမီးမိန်းကလေးကို သဘောမကျကြပါဘူး။
如 果 母 亲 怀 了 女 孩 ，可 能 就 会 打 胎 。
တကယ်လို့ မိခင်ဖြစ်သူက သမီးမိန်းကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရတယ်ဆိုရင်၊ (အဲဒီ) ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချကောင်း ဖျက်ချပါလိမ့်မယ်။
这 样 一 来 ，中 国 的 男 孩 比 女 孩 多 了 不 少 。
ဒီလိုနဲ့ပဲ၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ယောင်္ကျားလေး (ဦးရေ) ဟာ မိန်းကလေး (ဦးရေ) ထက် သိသိသာသာကြီး များပြားလာခဲ့ပါတယ်။
现 在 国 家 同 意 一 个 家 庭 生 两 个 孩 子 ，希 望 这 样 可 以 解 决 这 些 问 题 。
အခုတော့ နိုင်ငံတော်ဟာ မိသားစု တစ်ခုမှာ ကလေးနှစ်ယောက် မွေးဖွားဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်မှသာ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပေါ့။
1. 自从〔zìcóng〕ကတည်းက။ မှစ၍
2. 1980年〔yì jiǔ bā líng nián〕၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်
3. 中国〔Zhōng guó〕တရုတ်ပြည်
4. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
5. 家庭〔jiātíng〕အိမ်ထောင်စု။ မိသားစု
6. 只〔zhǐ〕... သာလျှင်။ ပဲ
7. 能〔néng〕... နိုင်သည်
8. 生〔shēng〕 မွေးဖွားသည်
15. 独生〔dúshēng〕တစ်ဦးတည်း မွေးဖွားလာသော
17. 这个〔zhège〕ဒီဟာ။ ဒီတစ်ခု
19. 让〔ràng〕... စေသည်
21. 慢慢地〔mànman de〕တဖြည်းဖြည်းချင်း
24. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
25. 出现〔chūxiàn〕 ပေါ်ထွက်လာသည်
26. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
28. 问题〔wèntí〕 ပြဿနာ
29. 2015年〔èr líng yī wǔ nián〕၂၀၁၅ ခုနှစ်
30. 50岁〔wǔshí suì〕အသက် ၅၀
31. 以上〔yīshàng〕... အထက်
33. 已经〔yǐjīng〕... ပြီးနှင့်ပြီ
34. 占〔zhàn〕တစုံတခုသော အခြေအနေတွင် ရှိခြင်း
35. 总人口〔zǒng rénkǒu〕စုစုပေါင်း လူဦးရေ
36. 30%〔bǎi fēn zhī sānshí〕၃၀ %
38. 比〔bǐ〕... ထက်
43. 喜欢〔xǐhuān〕ကြိုက်သည်။ သဘောကျသည်
44. 男孩〔nánhái〕သား ယောင်္ကျားလေး
45. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
46. 女孩〔nǚhái〕သမီး မိန်းကလေး
50. 可能〔kěnéng〕 ဖြစ်နိုင်သည်
52. 会〔huì〕လိမ့်မယ်။ တတ်သည်
54. 这样一来〔zhèyàng yì lái〕ဒီလိုနဲ့
57. 国家〔guó jiā〕 နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်
59. 一个〔yíge〕တစ်ယောက်။ တစ်ခု
60. 两个〔liǎngge〕 နှစ်ယောက်။ နှစ်ခု
62. 希望〔xīwàng〕 မျှော်လင့်သည်
64. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
65. 解决〔jiějué〕 ဖြေရှင်းသည်။ ပြေလည်စေသည်
66. 这些〔zhèxiē〕ဒါတွေ။ ဒီဟာတွေ
တဈအိမျထောငျ ကလေးတဈယောကျ ဥပဒေ။
တရုတျနိုငျငံ အစိုးရဟာ လူဦးရကေို ထိနျးခြုပျတဲ့အနနေဲ့ တဈအိမျထောငျ ကလေးတဈယောကျ ဥပဒကေို ပွဌာနျးခဲ့ပါတယျ။ အခုတော့ တဈအိမျထောငျ ကလေးနှဈယာကျယူလို့ ရနပေါပွီ။
၁၉၈၀-ပွညျ့နှဈကတညျးက စပွီး၊ တရုတျနိုငျငံက အိမျထောငျစုတှဟော ကလေးတဈယောကျပဲ ယူလို့ရကွပါတယျ။ (တဈအိမျထောငျ ကလေးတဈယောကျ ဥပဒအေရ)
ဒါကွောငျ့မို့ တရုတျနိုငျငံက လူငယျတှေ အားလုံးဟာ တဈဦးတညျးသော သားတှေ၊ တဈဦးတညျးသော သမီးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။
ဒီဆုံးဖွတျခကျြဟာ တရုတျနိုငျငံရဲ့ လူဦးရကေို တဖွညျးဖွညျးခငျြးသာ တိုးပှားလာစပေါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ပွဿနာတခြို့လညျး ပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၅-ခုနှဈမှာ၊ အသကျ ငါးဆယျကြျောသူတှဟော တရုတျနိုငျငံ စုစုပေါငျး လူဦးရရေဲ့ ၃၀% ထိ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။
သကျကွီးပိုငျး (လူဦးရေ) က လူငယျ (လူဦးရေ) ထကျ ပိုမြားလာပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ၊ မိသားစု အမြားစုက သားယောကငြ်္ားလေးကို သဘောကပြွီး၊ သမီးမိနျးကလေးကို သဘောမကကြွပါဘူး။
တကယျလို့ မိခငျဖွဈသူက သမီးမိနျးကလေးကို ကိုယျဝနျဆောငျနရေတယျဆိုရငျ၊ (အဲဒီ) ကိုယျဝနျကို ဖကျြခကြောငျး ဖကျြခပြါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ၊ တရုတျနိုငျငံရဲ့ ယောကငြ်္ားလေး (ဦးရေ) ဟာ မိနျးကလေး (ဦးရေ) ထကျ သိသိသာသာကွီး မြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။
အခုတော့ နိုငျငံတျောဟာ မိသားစု တဈခုမှာ ကလေးနှဈယောကျ မှေးဖှားဖို့ သဘောတူလိုကျပါတယျ၊ ဒီလိုလုပျမှသာ ဒီပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရတာပေါ့။
1. 自从〔zìcóng〕ကတညျးက။ မှစ၍
2. 1980年〔yì jiǔ bā líng nián〕၁၉၈၀ ပွညျ့နှဈ
3. 中国〔Zhōng guó〕တရုတျပွညျ
4. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
5. 家庭〔jiātíng〕အိမျထောငျစု။ မိသားစု
6. 只〔zhǐ〕... သာလြှငျ။ ပဲ
7. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
8. 生〔shēng〕 မှေးဖှားသညျ
15. 独生〔dúshēng〕တဈဦးတညျး မှေးဖှားလာသော
17. 这个〔zhège〕ဒီဟာ။ ဒီတဈခု
19. 让〔ràng〕... စသေညျ
21. 慢慢地〔mànman de〕တဖွညျးဖွညျးခငျြး
24. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
25. 出现〔chūxiàn〕 ပျေါထှကျလာသညျ
26. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
28. 问题〔wèntí〕 ပွဿနာ
29. 2015年〔èr líng yī wǔ nián〕၂၀၁၅ ခုနှဈ
30. 50岁〔wǔshí suì〕အသကျ ၅၀
31. 以上〔yīshàng〕... အထကျ
33. 已经〔yǐjīng〕... ပွီးနှငျ့ပွီ
34. 占〔zhàn〕တစုံတခုသော အခွအေနတှေငျ ရှိခွငျး
35. 总人口〔zǒng rénkǒu〕စုစုပေါငျး လူဦးရေ
38. 比〔bǐ〕... ထကျ
43. 喜欢〔xǐhuān〕ကွိုကျသညျ။ သဘောကသြညျ
44. 男孩〔nánhái〕သား ယောကငြ်္ားလေး
45. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
46. 女孩〔nǚhái〕သမီး မိနျးကလေး
50. 可能〔kěnéng〕 ဖွဈနိုငျသညျ
52. 会〔huì〕လိမျ့မယျ။ တတျသညျ
54. 这样一来〔zhèyàng yì lái〕ဒီလိုနဲ့
57. 国家〔guó jiā〕 နိုငျငံ။ တိုငျးပွညျ
59. 一个〔yíge〕တဈယောကျ။ တဈခု
60. 两个〔liǎngge〕 နှဈယောကျ။ နှဈခု
62. 希望〔xīwàng〕 မြှျောလငျ့သညျ
64. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
65. 解决〔jiějué〕 ဖွရှေငျးသညျ။ ပွလေညျစသေညျ
66. 这些〔zhèxiē〕ဒါတှေ။ ဒီဟာတှေ
ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေတယ်ဆိုတာ၊ ရွက်သစ်တွေ ဝေဖို့ဖြစ်လာတာပါ။
2:23 AM C-Text , Chinese
ကိစ္စတစ်ခုခုအပေါ်မှာ အဆိုးဘက်ကချည်း တွေးပြီး ပူဆွေးဝမ်းနည်းမနေဘဲ၊ အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးတတ်အောင် ဥပမာပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
白 老 师 家 里 有 一 只 白 猫 叫 小 月 。
" ပိုင် " ဆရာမ အိမ်မှာ " ရှောင်ယွဲ့ " လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်ဖြူတစ်ကောင် ရှိပါတယ်။
她 的 女 儿 很 喜 欢 它 。
သူမရဲ့ သမီးလေးက သူ့ကြောင်ကို အရမ်း ချစ်တယ်။
每 天 下 午 她 的 女 儿 都 会 和 小 月 在 花 园 里 玩 。
ညနေတိုင်း သူမရဲ့ သမီးလေးက " ရှောင်ယွဲ့ " နဲ့ ပန်းခြံထဲမှာ ဆော့ကစားကြတယ်။
一 天 下 午 女 儿 一 个 人 跑 回 家 ，大 叫 ：“ 不 好 了 ，妈 妈 ！小 月 不 见 了 ！”
တစ်နေ့၊ ညနေပိုင်းမှာ သမီးလေး တစ်ယောက်တည်း အိမ်ကို ပြန်ပြေးလာပြီး၊ " မေမေရေ၊ လုပ်ပါအုံး၊ ရှောင်ယွဲ့ကို မတွေ့တော့ဘူး " လို့ အကျယ်ကြီး အော်လိုက်တယ်။
白 老 师 大 吃 一 惊 ，“ 怎 么 回 事 ？”
" ပိုင် " ဆရာမက အလန့်တကြား ဖြစ်သွားတယ်၊ " ဘယ်လိုများ ဖြစ်တာလဲ " ။
“ 我 和 小 月 玩 的 时 候 ，我 的 朋 友 来 和 我 说 话 。说 完 ，小 月 就 不 见 了 。怎 么 办 ？” 女 儿 忍 不 住 哭 了 。
" သမီးနဲ့ ရှောင်ယွဲ့ ဆော့နေကြတုန်း၊ သမီးသူငယ်ချင်းက သမီးနဲ့ စကားလာပြောတယ်။ ပြောလည်း ပြီးရော၊ ရှောင်ယွဲ့ကို မတွေ့တော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ " သမီးလေးက မအောင့်အည်းနိုင်ဘဲ ငိုချလိုက်တယ်။
“ 赛 翁 失 马 焉 知 非 福 。说 不 定 这 是 一 件 好 事 呢 ？没 事 儿 ，没 事 的 。” 白 老 师 安 慰 女 儿 说 。
" အဖိုးအိုကြီး မြင်းပျောက်ဆုံး လာဘ်မကောင်းဘူး မထင်နဲ့အုံး ... တဲ့။ အဆိုးဘက်ကချည်း တွေးမနေပါနဲ့ ( ဒါက ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပါ ) ။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ စိတ်ထဲ ထားမနေနဲ့ ..." " ပိုင် "ဆရာမက သမီးလေးကို နှစ်သိမ့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
几 个 星 期 后 ，小 月 和 一 只 黑 猫 一 起 回 来 了 ！
သုံးလေးပါတ် ကြာတော့၊ " ရှောင်ယွဲ့ ( ကြောင်ဖြူ ) " နဲ့ ကြောင်မဲတစ်ကောင် အတူတူ ပြန်လာကြတယ်။
白 老 师 和 女 儿 喜 出 望 外 ，欢 迎 它 们 回 家 。
" ပိုင် " ဆရာမ နဲ့ သမီးလေးက မမျှော်လင့်ဘဲ ဝမ်းသာသွားပြီး၊ ကြောင်လေးတွေ အိမ်ပြန်လာကြတာကို လက်ခံကြိုဆိုကြပါတယ်။
1. 白老师〔Bái lǎoshī〕" ပိုင် " ဆရာမ
6. 白猫〔báimāo〕 ကြောင်ဖြူ
7. 叫〔jiào〕 ခေါ်သည်
8. 小月〔Xiǎo Yuè〕" ရှောင်ယွဲ့ " ( ကြောင်အမည် )
10. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
11. 女儿〔nǚ ér〕သမီး
14. 它〔tā〕သူ ( တိရိစ္ဆာန် )
15. 每天〔měitiān〕 နေ့တိုင်း
18. 会〔huì〕တတ်သည်။ လိမ့်မယ်
19. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
20. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
22. 玩〔wán〕 ဆော့ကစားသည်
23. 一天〔yìtiān〕တစ်နေ့။ တစ်ရက်
26. 跑〔pǎo〕 ပြေးသည်
27. 回〔huí〕 ပြန်သည်
28. 大叫〔dàjiào〕အကျယ်ကြီး အော်သည်
29. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
30. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
31. 了〔le〕 ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
32. 妈妈〔māma〕 မေမေ
33. 见〔jiàn〕 တွေ့မြင်သည်
34. 大吃一惊〔dà chī yì jīng〕အလန့်တကြား ဖြစ်မိသည်
35. 怎么回事〔zěnme huíshì〕ဘယ်လိုများ ဖြစ်ရတာလဲ
36. 我〔wǒ〕ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ။ ငါ
37. 的时候〔de shíhòu〕... တုန်းက။ တဲ့အချိန်မှာ
40. 说〔shuō〕 ပြောသည်
42. 完〔wán〕 ပြီးဆုံးသည်
43. 就〔jiù〕... လျှင် ... ခြင်း
45. 办〔bàn〕 ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည်
46. 忍不住〔rěn bú zhù〕မအောင့်အည်းနိုင်
48. 赛翁失马焉知非福〔sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú〕အဖိုးအိုကြီး မြင်းပျောက်ဆုံး၊ လာဘ်မကောင်းဘူး မထင်နဲ့အုံး။ ( ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေတယ်ဆိုတာ ရွက်သစ်တွေ ဝေဖို့ဖြစ်လာတာပါ )
49. 说不定〔shuō búdìng〕အတိအကျ မပြောနိုင်ပါ
50. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
51. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
52. 一件〔yíjiàn〕တစ်ခု။ တစ်ရပ်
55. 没事儿〔méishìr〕ကိစ္စ မရှိပါ
56. 没事的〔méishìde〕ကိစ္စ မရှိပါ
57. 安慰〔ān wèi〕 နှစ်သိမ့်သည်
60. 后〔hòu〕 ပြီးနောက်
61. 黑猫〔hēimāo〕 ကြောင်မဲ
63. 喜出望外〔xǐ chū wàng wài〕ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကိစ္စနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ကြုံရ၍ ဝမ်းသာအယ်လဲ ဖြစ်မိသည်။
65. 它们〔tāmen〕သူတို့ ( တိရိစ္ဆာန် )
ရှကျဟောငျးတှေ ကွှတေယျဆိုတာ၊ ရှကျသဈတှေ ဝဖေို့ဖွဈလာတာပါ။
ကိစ်စတဈခုခုအပျေါမှာ အဆိုးဘကျကခညျြး တှေးပွီး ပူဆှေးဝမျးနညျးမနဘေဲ၊ အကောငျးဘကျက လှညျ့တှေးတတျအောငျ ဥပမာပေးထားတဲ့ ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျပါ။
" ပိုငျ " ဆရာမ အိမျမှာ " ရှောငျယှဲ့ " လို့ ချေါတဲ့ ကွောငျဖွူတဈကောငျ ရှိပါတယျ။
သူမရဲ့ သမီးလေးက သူ့ကွောငျကို အရမျး ခဈြတယျ။
ညနတေိုငျး သူမရဲ့ သမီးလေးက " ရှောငျယှဲ့ " နဲ့ ပနျးခွံထဲမှာ ဆော့ကစားကွတယျ။
တဈနေ့၊ ညနပေိုငျးမှာ သမီးလေး တဈယောကျတညျး အိမျကို ပွနျပွေးလာပွီး၊ " မမေရေေ၊ လုပျပါအုံး၊ ရှောငျယှဲ့ကို မတှတေ့ော့ဘူး " လို့ အကယျြကွီး အျောလိုကျတယျ။
" ပိုငျ " ဆရာမက အလနျ့တကွား ဖွဈသှားတယျ၊ " ဘယျလိုမြား ဖွဈတာလဲ " ။
" သမီးနဲ့ ရှောငျယှဲ့ ဆော့နကွေတုနျး၊ သမီးသူငယျခငျြးက သမီးနဲ့ စကားလာပွောတယျ။ ပွောလညျး ပွီးရော၊ ရှောငျယှဲ့ကို မတှတေ့ော့ဘူး။ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ " သမီးလေးက မအောငျ့အညျးနိုငျဘဲ ငိုခလြိုကျတယျ။
" အဖိုးအိုကွီး မွငျးပြောကျဆုံး လာဘျမကောငျးဘူး မထငျနဲ့အုံး ... တဲ့။ အဆိုးဘကျကခညျြး တှေးမနပေါနဲ့ ( ဒါက ကောငျးတဲ့ကိစ်စတဈခု ဖွဈခငျြလညျး ဖွဈမှာပါ ) ။ ဘာမှ မဖွဈဘူး။ စိတျထဲ ထားမနနေဲ့ ..." " ပိုငျ "ဆရာမက သမီးလေးကို နှဈသိမျ့ပွီး ပွောလိုကျတယျ။
သုံးလေးပါတျ ကွာတော့၊ " ရှောငျယှဲ့ ( ကွောငျဖွူ ) " နဲ့ ကွောငျမဲတဈကောငျ အတူတူ ပွနျလာကွတယျ။
" ပိုငျ " ဆရာမ နဲ့ သမီးလေးက မမြှျောလငျ့ဘဲ ဝမျးသာသှားပွီး၊ ကွောငျလေးတှေ အိမျပွနျလာကွတာကို လကျခံကွိုဆိုကွပါတယျ။
1. 白老师〔Bái lǎoshī〕" ပိုငျ " ဆရာမ
6. 白猫〔báimāo〕 ကွောငျဖွူ
7. 叫〔jiào〕 ချေါသညျ
8. 小月〔Xiǎo Yuè〕" ရှောငျယှဲ့ " ( ကွောငျအမညျ )
10. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
14. 它〔tā〕သူ ( တိရိစ်ဆာနျ )
15. 每天〔měitiān〕 နတေို့ငျး
18. 会〔huì〕တတျသညျ။ လိမျ့မယျ
19. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
20. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
22. 玩〔wán〕 ဆော့ကစားသညျ
23. 一天〔yìtiān〕တဈနေ့။ တဈရကျ
26. 跑〔pǎo〕 ပွေးသညျ
27. 回〔huí〕 ပွနျသညျ
28. 大叫〔dàjiào〕အကယျြကွီး အျောသညျ
29. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
30. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
31. 了〔le〕 ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
32. 妈妈〔māma〕 မမေေ
33. 见〔jiàn〕 တှမွေ့ငျသညျ
34. 大吃一惊〔dà chī yì jīng〕အလနျ့တကွား ဖွဈမိသညျ
35. 怎么回事〔zěnme huíshì〕ဘယျလိုမြား ဖွဈရတာလဲ
36. 我〔wǒ〕ကြှနျတျော၊ ကြှနျမ။ ငါ
37. 的时候〔de shíhòu〕... တုနျးက။ တဲ့အခြိနျမှာ
40. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
42. 完〔wán〕 ပွီးဆုံးသညျ
43. 就〔jiù〕... လြှငျ ... ခွငျး
45. 办〔bàn〕 ပွုလုပျဆောငျရှကျသညျ
46. 忍不住〔rěn bú zhù〕မအောငျ့အညျးနိုငျ
48. 赛翁失马焉知非福〔sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú〕အဖိုးအိုကွီး မွငျးပြောကျဆုံး၊ လာဘျမကောငျးဘူး မထငျနဲ့အုံး။ ( ရှကျဟောငျးတှေ ကွှတေယျဆိုတာ ရှကျသဈတှေ ဝဖေို့ဖွဈလာတာပါ )
49. 说不定〔shuō búdìng〕အတိအကြ မပွောနိုငျပါ
51. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
52. 一件〔yíjiàn〕တဈခု။ တဈရပျ
55. 没事儿〔méishìr〕ကိစ်စ မရှိပါ
56. 没事的〔méishìde〕ကိစ်စ မရှိပါ
57. 安慰〔ān wèi〕 နှဈသိမျ့သညျ
60. 后〔hòu〕 ပွီးနောကျ
61. 黑猫〔hēimāo〕 ကွောငျမဲ
63. 喜出望外〔xǐ chū wàng wài〕ဝမျးမွောကျဖှယျကိစ်စနှငျ့ မမြှျောလငျ့ဘဲ ကွုံရ၍ ဝမျးသာအယျလဲ ဖွဈမိသညျ။
65. 它们〔tāmen〕သူတို့ ( တိရိစ်ဆာနျ )
1:59 AM C-Text , Chinese
ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ ဆိုတာ ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။
怎 么 才 能 保 持 身 体 健 康 ？
ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ။
我 的 办 法 是 ，第 一 ，天 气 冷 了 ，多 穿 衣 服 ，天 气 热 了，少 穿 衣 服 。
ကျွန်တော့်ရဲ့ နည်းလမ်းကတော့၊ ပထမအချက်၊ ရာသီဥတု အေးလာရင် အဝတ်အစား ပိုဝတ်မယ်၊ ရာသီဥတု ပူလာရင် အဝတ်အစား လျှော့ဝတ်မယ်။
第 二 ，多 喝 水 ，多 吃 水 果 ，少 喝 酒 ，少 吃 药 。
ဒုတိယအချက်၊ ရေများများ သောက်မယ်၊ သစ်သီးများများ စားမယ်၊ အရက် လျှော့သောက်မယ်၊ ဆေး လျှော့စားမယ်။
第 三 ，工 作 不 能 太 累 ，注 意 休 息 。
တတိယအချက်၊ အလုပ်ကို သိပ်ပင်ပန်းမခံပဲ၊ အနားယူဖို့ သတိပြုရမယ်။
第 四 ，经 常 出 去 玩 ，或 者 去 公 园 ，或 者 参 观 博 物 馆 ，或 者 和 朋 友 一 起 吃 饭 ，或 者 …… 。
စတုတ္ထအချက်၊ မကြာမကြာ လျှောက်လည်ကြမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပန်းခြံ သွားကြမယ်၊ သို့မဟုတ် ပြတိုက်ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ထမင်းစားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ...... ။
第 五 ，保 持 精 神 愉 快 ，不 要 生 气 。
ပဉ္စမအချက်၊ စိတ်ကို ပျော်အောင်ထားမယ်၊ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။
我 的 朋 友 对 我 说 ，还 应 该 经 常 锻 炼 身 体 。
ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မကြာခဏ လုပ်သင့်သေးတယ်လို့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။
可 是 我 不 锻 炼 身 体 ，身 体 也 非 常 好 ，什 么 病 也 没 有 。
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘူး၊ ကျန်းမာရေးလည်း အရမ်း ကောင်းတယ်၊ ဘာရောဂါမှလည်း မရှိပါဘူး။
2. 才〔cái〕... မှသာ
3. 能〔néng〕... နိုင်သည်
5. 身体〔shēntǐ〕ကျန်းမာရေး။ ခန္ဓာကိုယ်
7. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
13. 冷〔lěng〕 အေးမြသော
14. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
17. 衣服〔yīfu〕အင်္ကျီ။ အဝတ်အစား
20. 第二〔dì èr〕ဒုတိယ
21. 喝〔hē〕 သောက်သည်
22. 水〔shuǐ〕 ရေ
26. 药〔yào〕 ဆေး။ ဆေးဝါး
29. 不〔bù〕မ ... ပါ
31. 累〔lèi〕ပင်ပန်းသော။ မောပန်းသော
36. 出去玩〔chūqùwán〕 လျှောက်လည်သည်
37. 或者〔huòzhe〕သို့မဟုတ်။ ဒါမှမဟုတ်
41. 博物馆〔bówùguǎn〕 ပြတိုက်
42. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
48. 愉快〔yúkuài〕 ပျော်ရွှင်သော
49. 不要〔búyào〕မ ... နဲ့
51. 对〔duì〕... ကို။ အား
52. 说〔shuō〕 ပြောသည်
53. 还〔hái〕... သေးသည်
54. 应该〔yīnggāi〕... သင့်သည်
55. 锻炼〔duànliàn〕 လေ့ကျင့်သည်
57. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
59. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
61. 病〔bìng〕 ရောဂါ
ကနျြးမာရေးကို ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလဲ ဆိုတာ ကနျြးမာအောငျ ဘယျလိုပွုမူနထေိုငျသလဲ ဆိုတဲ့အပျေါမှာ အမြားကွီး မူတညျနပေါတယျ။
ကနျြးမာရေးကို ဘယျလို ထိနျးသိမျးနိုငျမလဲ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နညျးလမျးကတော့၊ ပထမအခကျြ၊ ရာသီဥတု အေးလာရငျ အဝတျအစား ပိုဝတျမယျ၊ ရာသီဥတု ပူလာရငျ အဝတျအစား လြှော့ဝတျမယျ။
ဒုတိယအခကျြ၊ ရမြေားမြား သောကျမယျ၊ သဈသီးမြားမြား စားမယျ၊ အရကျ လြှော့သောကျမယျ၊ ဆေး လြှော့စားမယျ။
တတိယအခကျြ၊ အလုပျကို သိပျပငျပနျးမခံပဲ၊ အနားယူဖို့ သတိပွုရမယျ။
စတုတ်ထအခကျြ၊ မကွာမကွာ လြှောကျလညျကွမယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ပနျးခွံ သှားကွမယျ၊ သို့မဟုတျ ပွတိုကျကို လှညျ့လညျကွညျ့ရှုကွမယျ၊ ဒါမှမဟုတျ သူငယျခငျြးနဲ့အတူ ထမငျးစားမယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ...... ။
ပဉ်စမအခကျြ၊ စိတျကို ပြျောအောငျထားမယျ၊ စိတျမဆိုးပါနဲ့။
ကနျြးမာရေး လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ မကွာခဏ လုပျသငျ့သေးတယျလို့ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးက ကြှနျတေျာ့ကို ပွောတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ကနျြးမာရေး လကေ့ငျြ့ခနျး မလုပျဘူး၊ ကနျြးမာရေးလညျး အရမျး ကောငျးတယျ၊ ဘာရောဂါမှလညျး မရှိပါဘူး။
2. 才〔cái〕... မှသာ
3. 能〔néng〕... နိုငျသညျ
5. 身体〔shēntǐ〕ကနျြးမာရေး။ ခန်ဓာကိုယျ
7. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော
8. 的〔de〕ရဲ့။ ၏
13. 冷〔lěng〕 အေးမွသော
14. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
17. 衣服〔yīfu〕အကငြ်္ီ။ အဝတျအစား
21. 喝〔hē〕 သောကျသညျ
22. 水〔shuǐ〕 ရေ
26. 药〔yào〕 ဆေး။ ဆေးဝါး
31. 累〔lèi〕ပငျပနျးသော။ မောပနျးသော
36. 出去玩〔chūqùwán〕 လြှောကျလညျသညျ
37. 或者〔huòzhe〕သို့မဟုတျ။ ဒါမှမဟုတျ
41. 博物馆〔bówùguǎn〕 ပွတိုကျ
42. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
48. 愉快〔yúkuài〕 ပြျောရှငျသော
49. 不要〔búyào〕မ ... နဲ့
52. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
53. 还〔hái〕... သေးသညျ
54. 应该〔yīnggāi〕... သငျ့သညျ
55. 锻炼〔duànliàn〕 လကေ့ငျြ့သညျ
57. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
59. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
61. 病〔bìng〕 ရောဂါ
Source: Speed-up Chinese <book-2>
哪里哪里 - မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
1:37 AM C-Text , Chinese
哪里哪里 ဆိုတာ နေ့စဉ်သုံး စကားပြောပုံစံတွေမှာ အသုံးအများဆုံး စကားစုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော 哪里哪里 လို့ ပြောဖူးပါသလား။
哪里 哪里 nǎlǐ nǎlǐ
小 乐 的 朋 友 结 婚 了 。
" ရှောင်လဲာ့ " ရဲ့ သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်တယ်။
小 乐 和 她 的 外 国 男 朋 友 保 罗 去 参 加 了 他 们 的 婚 礼 。
" ရှောင်လဲာ့ " နဲ့ သူမရဲ့ နိုင်ငံခြားသားရည်းစား Paul တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို သွားတက်ရောက်ကြတယ်။
这 是 保 罗 第 一 次 参 加 中 国 人 的 婚 礼 ， 他 有 点 儿 紧 张 。
ဒါဟာ Paul အတွက် တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်ခြင်းပါပဲ၊ သူ နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့။
保 罗 看 到 新 娘 很 漂 亮 ， 就 对 新 郎 说 ：“ 你 的 新 娘 真 漂 亮 ！”
သတို့သမီး အရမ်း ချောတာကို Paul တွေ့လိုက်တော့၊ ချက်ချင်းပဲ သတို့သားကို ပြောလိုက်တယ် " ခင်ဗျားရဲ့ သတို့သမီး တကယ် လှတယ်ဗျာ " ။
新 郎 很 高 兴 ，但 是 还 是 很 谦 虚 地 说 ：“ 哪 里 哪 里 ！”
သတို့သားက အရမ်း ဝမ်းသာသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရမ်း နှိမ့်ချပြီး " 哪 里 哪 里 ！nǎlǐ nǎlǐ ဘယ်ကလာ " လို့ ပြောလိုက်တယ်။
保 罗 以 为 新 浪 问 他 “ 新 娘 的 哪 个 地 方 漂 亮 ” ，就 连 忙 说 ：“ 头 发 、眼 睛 、鼻 子 、嘴 都 很 漂 亮 ！”
" သတို့သမီးရဲ့ ဘယ်နေရာတွေများ လှနေတာလဲ " လို့ သတို့သားက သူ့ကို မေးတယ်လို့ Paul က ထင်လိုက်ပြီး၊ " ဆံပင်၊ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ် အားလုံး အရမ်း လှတယ်ဗျာ " လို့ ကမန်းကတန်း ပြောလိုက်တယ်။
★ အသုံးအနှုန်း သတိပြု
"哪里" ကို နှစ်ခါသုံးပြီး "哪里哪里" လို့ ပြောတာဟာ " ဘယ်နေရာလဲ " လို့ မေးတာမဟုတ်ပါ။ " ဘယ်ကလာ " ၊ " ဒီလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး " စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။
1. 小乐〔Xiǎo Lè〕လူအမည်
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က။
3. 男朋友〔nán péngyou〕boy friend
5. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
6. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
8. 外国〔wàiguó〕 နိုင်ငံခြား
9. 保罗〔Bǎoluó〕Paul ( အင်္ဂလိပ်အမည် )
14. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
15. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
16. 第一次〔dìyī cì〕ပထမအကြိမ်
20. 紧张〔jǐnzhāng〕ထက်သန်တက်ကြွ၍ စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်
21. 看到〔kàndào〕 တွေ့ရသည်
26. 对〔duì〕... ကို။ အား
27. 说〔shuō〕 ပြောသည်
28. 你〔nǐ〕မင်း။ နင်။ သင်
33. 还是〔háishì〕 မျှော်လင့်မထားသော တစုံတခု သို့မဟုတ် အံ့သြမှုကို ဖော်ပြရာတွင် သုံးသည်
35. 地〔de〕... စွာ ( ကြိယာနောက်ဆက် )
36. 哪里哪里〔nǎlǐ nǎlǐ〕ဘယ်ကလာ ( ဒီလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး )
38. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်
39. 哪个〔nǎge〕ဘယ်ဟာလဲ။ ဘယ်တစ်ခုလဲ
40. 地方〔dìfāng〕 နေရာ။ ဒေသ
44. 鼻子〔bǐzi〕 နှာခေါင်း
哪里哪里 - မွနျမာလို ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
哪里哪里 ဆိုတာ နစေ့ဉျသုံး စကားပွောပုံစံတှမှော အသုံးအမြားဆုံး စကားစုတဈခု ဖွဈပါတယျ။ သငျရော 哪里哪里 လို့ ပွောဖူးပါသလား။
" ရှောငျလဲာ့ " ရဲ့ သူငယျခငျြး မင်ျဂလာဆောငျတယျ။
" ရှောငျလဲာ့ " နဲ့ သူမရဲ့ နိုငျငံခွားသားရညျးစား Paul တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲကို သှားတကျရောကျကွတယျ။
ဒါဟာ Paul အတှကျ တရုတျလူမြိုးတှရေဲ့ မင်ျဂလာပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျ တကျရောကျခွငျးပါပဲ၊ သူ နညျးနညျးတော့ စိတျလှုပျရှားတာပေါ့။
သတို့သမီး အရမျး ခြောတာကို Paul တှလေို့ကျတော့၊ ခကျြခငျြးပဲ သတို့သားကို ပွောလိုကျတယျ " ခငျဗြားရဲ့ သတို့သမီး တကယျ လှတယျဗြာ " ။
သတို့သားက အရမျး ဝမျးသာသှားတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အရမျး နှိမျ့ခပြွီး " 哪 里 哪 里 ！nǎlǐ nǎlǐ ဘယျကလာ " လို့ ပွောလိုကျတယျ။
" သတို့သမီးရဲ့ ဘယျနရောတှမြေား လှနတောလဲ " လို့ သတို့သားက သူ့ကို မေးတယျလို့ Paul က ထငျလိုကျပွီး၊ " ဆံပငျ၊ မကျြလုံး၊ နှာခေါငျး၊ ပါးစပျ အားလုံး အရမျး လှတယျဗြာ " လို့ ကမနျးကတနျး ပွောလိုကျတယျ။
★ အသုံးအနှုနျး သတိပွု
"哪里" ကို နှဈခါသုံးပွီး "哪里哪里" လို့ ပွောတာဟာ " ဘယျနရောလဲ " လို့ မေးတာမဟုတျပါ။ " ဘယျကလာ " ၊ " ဒီလောကျလညျး မဟုတျပါဘူး " စသညျဖွငျ့ မိမိကိုယျကို နှိမျ့ခပြွီး ယဉျယဉျကြေးကြေး တုံ့ပွနျပွောဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးတဈခုပါ။
1. 小乐〔Xiǎo Lè〕လူအမညျ
2. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က။
5. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
6. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
8. 外国〔wàiguó〕 နိုငျငံခွား
9. 保罗〔Bǎoluó〕Paul ( အင်ျဂလိပျအမညျ )
15. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
16. 第一次〔dìyī cì〕ပထမအကွိမျ
20. 紧张〔jǐnzhāng〕ထကျသနျတကျကွှ၍ စိတျလှုပျရှားစသေညျ
21. 看到〔kàndào〕 တှရေ့သညျ
27. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
28. 你〔nǐ〕မငျး။ နငျ။ သငျ
33. 还是〔háishì〕 မြှျောလငျ့မထားသော တစုံတခု သို့မဟုတျ အံ့သွမှုကို ဖျောပွရာတှငျ သုံးသညျ
35. 地〔de〕... စှာ ( ကွိယာနောကျဆကျ )
36. 哪里哪里〔nǎlǐ nǎlǐ〕ဘယျကလာ ( ဒီလောကျလညျး မဟုတျပါဘူး )
38. 问〔wèn〕 မေးမွနျးသညျ
39. 哪个〔nǎge〕ဘယျဟာလဲ။ ဘယျတဈခုလဲ
40. 地方〔dìfāng〕 နရော။ ဒသေ
44. 鼻子〔bǐzi〕 နှာခေါငျး
二百五 မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
10:36 PM C-Text , Chinese
二百五 ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သင် သုံးဖူးကောင်း သုံးဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဝေါဟာရရဲ့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဇစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
二百五 èr bǎi wǔ
“ 他 是 个 二 百 五 ”，这 里 的 “ 二 百 五 ” 可 不 是 数 字 的 250 ，而 是 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 。
" သူက 二百五 èr bǎi wǔ တစ်ယောက်ပဲ " ၊ ဒီထဲမှာ 二百五 èr bǎi wǔ ဆိုတာ သင်္ချာစကားလုံး ၂၅၀ မဟုတ်ပါဘူး၊ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
为 什 么 “ 二 百 五 ” 有 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 呢 ？
ဘာကြောင့် 二百五 èr bǎi wǔ မှာ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး ရှိနေတာလဲ။
传 说 ，战 国 时 期 ，有 个 非 常 有 名 的 人 叫 苏 秦 。
ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအရ၊ " ကျန့် " နိုင်ငံခေတ်တုန်းက " စူးချင် " လို့ ခေါ်တဲ့ အလွန် နာမည်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။
他 在 齐 国 被 人 杀 了 ，齐 王 很 生 气 ，想 要 为 苏 秦 报 仇 ，可 一 时 又 找 不 到 凶 手 。
သူက "ချီ " နိုင်ငံမှာ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်တော့ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင်က အရမ်း ဒေါသထွက်သွားတယ်၊ " စူးချင် " အတွက် လက်စားချေချင်ပေမယ့်၊ လူသတ်သမားကို ရှာမတွေ့နိုင်ဖြစ်နေတယ်။
于 是 ，齐 王 想 到 了 一 个 办 法 。
ဒီလိုနဲ့ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင်ဟာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားမိသွားတယ်။
他 让 人 把 苏 秦 的 头 割 下 来 ，挂 在 城 门 上 ，旁 边 写 道 ：苏 秦 是 个 内 奸 ，杀 了 他 的 人 可 以 得 到 一 千 两 黄 金 。
ဘုရင်က သူ့လူတွေကို " စူးချင် " ရဲ့ ခေါင်းကို ဖြတ်ခိုင်းပြီး၊ မြို့တံခါးပေါ်မှာ ချိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ ဘေးမှာ ရေးထားတာက " စူးချင် " ဟာ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်ပါ၊ သူ့ကို သတ်လိုက်တဲ့လူဟာ ရွှေသားချိန် တစ်ထောင် ရလိမ့်မယ်။
不 久 ，就 有 四 个 人 来 到 齐 王 面 前 ，都 说 苏 秦 是 自 己 杀 的 。
မကြာပါဘူး၊ လူလေးယောက်ဟာ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင် ရှေ့မှောက်ကို ရောက်လာပြီး၊ " စူးချင် " ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်လိုက်တာပါလို့ ဝန်ခံပြောဆိုကြတယ်။
齐 王 问 ：“ 一 千 两 黄 金 ，你 们 每 人 可 以 得 到 多 少 ？”
" ချီ " နိုင်ငံဘုရင်က မေးလိုက်တယ် " ရွှေသားချိန် တစ်ထောင်ကို သင်တို့တစ်ယောက်စီ ခွဲဝေယူရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ "။
四 个 人 不 知 道 自 己 中 计 了 ，还 高 兴地 回 答 ：“ 每 人 二 百 五 。”
လူလေးယောက်ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေတာ မသိဘဲ၊ " တစ်ယောက်ကို 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ရမယ် " လို့ ဝမ်းသာပြီး ပြန်ဖြေလိုက်သေးတယ်။
齐 王 大 怒 道 ：“ 来 人 ，把 这 四 个 ‘ 二 百 五 ‘ 推 出 去 杀 了 ！”
" ချီ " နိုင်ငံဘုရင်ဟာ အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်၊ " လာကြစမ်း၊ ဒီ 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ လေးကောင်ကို ဆွဲထုတ်သွားပြီး သတ်ပစ်ကြစမ်း " ။
这 四 个 人 成 了 替 死 鬼 被 杀 了 。
ဒီလူလေးယောက်ဟာ ဓားစာခံအဖြစ်နဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်။
而 真 正 的 凶 手 据 说 是 秦 国 的 人 ，早 就 逃 回 秦 国 去 了 。
နောက်တော့ ပြောသံကြားတာက လူသတ်သမား အစစ်က " ချင် " နိုင်ငံကလူဖြစ်ပြီး၊ အစောကြီးကတည်းက " ချင် " နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးသွားပြီ။
“ 二 百 五 ” 这 个 词 就 这 样 流 传 下 来 了 ，人 们 常 常 在 开 玩 笑 的 时 候 用 它 来 形 容 傻 瓜 、笨 蛋 ，但 它 不 是 骂 人 的 话 。
二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ဆိုတဲ့ ဒီဝေါဟာရဟာ ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတာလို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်၊ လူတွေက နောက်ပြောင်ကြတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အဲဒါကိုသုံးပြီး " ငနုံ၊ ငတုံး၊ ငအ " စသည်ဖြင့် ဖော်ပြကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက သူများကို ဆဲဆိုတဲ့စကား မဟုတ်ပါဘူး။
现 在 ，单 单 一 个 “ 二 ” 字 也 有 同 样 的 意 思 ，比 如 “ 你 怎 么 那 么 二 啊 ” ，就 是 “ 你 怎 么 那 么 傻 啊 ” 的 意 思 。
အခု၊ " 二 èr ၂ " စာလုံး တစ်လုံးတည်းမှာလည်း အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ်မျိုး ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ- " 你 怎 么 那 么 二 啊 မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်တုံးရတာလဲ ” ဆိုတာဟာ " 你 怎 么 那 么 傻 啊 မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်တုံးရတာလဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲပေါ့။
2. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
3. 个〔ge〕... ယောက်
4. 二百五〔èr bǎi wǔ〕၂၅၀
6. 的〔de〕တဲ့။ က
7. 不是...而是〔búshì...érshì〕မ ... ဟုတ်ဘဲ၊ ... ဟုတ်တယ်
9. 傻瓜〔shǎguā〕ငတုံး။ ငနုံ။ ငအ
14. 传说〔chuánshuō〕တဆင့်စကားပြောသည်။ ပါးစပ်ရာဇဝင်။ ရိုးရာပုံပြင်
15. 战国〔zhànguó〕" ကျန့် " နိုင်ငံ ( BC-475 မှ BC-221 ထိ )
20. 叫〔jiào〕 ခေါ်သည်
22. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
23. 齐国〔qíguó〕" ချီ " နိုင်ငံ ( BC-1066 မှ BC-256 ထိ 周 မင်းဆက်ခေတ်မှ ပြည်ထောင်တစ်ခု )
24. 被〔bèi〕... ခံရခြင်း
26. 了〔le〕... ခဲ့တယ်။ ပြီးပြီ
27. 齐王〔qíwáng〕" ချီ " နိုင်ငံ ဘုရင်
30. 想要〔xiǎngyào〕... ချင်သည်
31. 为〔wèi〕... အတွက်
33. 一时〔yìshí〕အချိန်တိုလေး။ ယာယီ
34. 又〔yòu〕လည်းပဲ။ နောက်ထပ်
35. 找不到〔zhǎo búdào〕ရှာမတွေ့ပါ
37. 于是〔yúshì〕သို့ဖြစ်၍။ ဤသို့အားဖြင့်
41. 让〔ràng〕... စေသည်။ ... ခိုင်းသည်
42. 把〔bǎ〕... ကို
43. 头〔tóu〕 ခေါင်း
44. 割下来〔gē xiàlái〕 ဖြတ်လိုက်သည်
48. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
49. 写道〔xiědào〕 ရေးသားသည်
50. 内奸〔nèijiān〕အတွင်းသူလျှို။ အသားထဲက လောက်ကောင်
51. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
54. 两〔liǎng〕တရုတ်အောင်စ ( ဂရမ် ငါးဆယ်နှင့် ညီမျှသည် )
55. 黄金〔huángjīn〕 ရွှေ။ ရွှေဝါ
57. 就〔jiù〕... သာလျှင်
58. 四个〔sìge〕 လေးယောက်
59. 来到〔láidào〕 ရောက်လာသည်
60. 面前〔miànqián〕 ရှေ့မှောက်
62. 说〔shuō〕 ပြောသည်
63. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
64. 的〔de〕... ခဲ့တယ်
65. 问〔wèn〕 မေးသည်
69. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
71. 中计〔zhòngjì〕 ထောင်ချောက်ထဲ သက်ဆင်းမိသည်
72. 还〔hái〕... သေးသည်
73. 高兴地〔gāoxìng de〕ဝမ်းသာစွာ
74. 回答〔huídá〕 ပြန်ဖြေသည်
75. 大怒〔dànù〕အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်သည်
76. 道〔dào〕 ပြောဆိုသည်။ ပြောသည်
78. 这〔zhè〕ဒီ။ ဒါ
79. 推出去〔tuū chūqù〕ဆွဲထုတ်သွားသည်
80. 成〔chéng〕 ဖြစ်သည်
82. 而〔ér〕 ပြီး
83. 真正〔zhēnzhèng〕အစစ်။ အစစ်အမှန်
84. 据说〔jùshuō〕 ပြောသံကြားရသည်။ ... သတဲ့
85. 秦国〔qínguó〕" ချင် " နိုင်ငံ ( BC-221 မှ BC-206 ထိ )
86. 早就〔zǎojiù〕အစောကြီး ကတည်းက
87. 逃〔táo〕တိမ်းရှောင်သည်။ ပြေးသည်
88. 回〔huí〕 ပြန်သည်
91. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ
92. 就〔jiù〕... ပဲ။ ပဲပေါ့
95. 下来〔xiàlái〕... လာသည်
98. 在〔zài〕... မှာ
99. 开玩笑〔kāiwánxiào〕 နောက်ပြောင်သည်
100. 的时候〔de shíhòu〕... တဲ့အခါမှာ
104. 形容〔xíngróng〕 ဖော်ပြသည်
107. 骂人〔mà rén〕လူကို ဆဲသည်
110. 单单〔dāndan〕... သာလျှင်
111. 二〔èr〕 နှစ် ( ၂ )
113. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
119. 就是〔jiùshì〕... ပဲပေါ့
120. 傻〔shǎ〕 နုံသည်။ အသည်။ တုံးသည်
二百五 မွနျမာလို ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
二百五 ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို သငျ သုံးဖူးကောငျး သုံးဖူးပါလိမျ့မယျ။ ဒီဝေါဟာရရဲ့ စတငျပျေါပေါကျလာတဲ့ ဇဈမွဈကို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
" သူက 二百五 èr bǎi wǔ တဈယောကျပဲ " ၊ ဒီထဲမှာ 二百五 èr bǎi wǔ ဆိုတာ သခငြ်္ာစကားလုံး ၂၅၀ မဟုတျပါဘူး၊ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
ဘာကွောငျ့ 二百五 èr bǎi wǔ မှာ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုး ရှိနတောလဲ။
ပါးစပျရာဇဝငျတှအေရ၊ " ကနျြ့ " နိုငျငံခတျေတုနျးက " စူးခငျြ " လို့ ချေါတဲ့ အလှနျ နာမညျကြျောကွားသူတဈယောကျ ရှိခဲ့တယျ။
သူက "ခြီ " နိုငျငံမှာ အသတျခံလိုကျရတယျတော့ " ခြီ " နိုငျငံဘုရငျက အရမျး ဒေါသထှကျသှားတယျ၊ " စူးခငျြ " အတှကျ လကျစားခခြေငျြပမေယျ့၊ လူသတျသမားကို ရှာမတှနေို့ငျဖွဈနတေယျ။
ဒီလိုနဲ့ " ခြီ " နိုငျငံဘုရငျဟာ နညျးလမျးတဈခုကို စဉျးစားမိသှားတယျ။
ဘုရငျက သူ့လူတှကေို " စူးခငျြ " ရဲ့ ခေါငျးကို ဖွတျခိုငျးပွီး၊ မွို့တံခါးပျေါမှာ ခြိတျခိုငျးလိုကျတယျ၊ ဘေးမှာ ရေးထားတာက " စူးခငျြ " ဟာ သစ်စာဖောကျ တဈယောကျပါ၊ သူ့ကို သတျလိုကျတဲ့လူဟာ ရှသေားခြိနျ တဈထောငျ ရလိမျ့မယျ။
မကွာပါဘူး၊ လူလေးယောကျဟာ " ခြီ " နိုငျငံဘုရငျ ရှမှေ့ောကျကို ရောကျလာပွီး၊ " စူးခငျြ " ကို သူတို့ကိုယျတိုငျ သတျလိုကျတာပါလို့ ဝနျခံပွောဆိုကွတယျ။
" ခြီ " နိုငျငံဘုရငျက မေးလိုကျတယျ " ရှသေားခြိနျ တဈထောငျကို သငျတို့တဈယောကျစီ ခှဲဝယေူရငျ ဘယျလောကျရနိုငျမလဲ "။
လူလေးယောကျဟာ သူတို့ကိုယျတိုငျ ထောငျခြောကျထဲရောကျနတော မသိဘဲ၊ " တဈယောကျကို 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ရမယျ " လို့ ဝမျးသာပွီး ပွနျဖွလေိုကျသေးတယျ။
" ခြီ " နိုငျငံဘုရငျဟာ အကွီးအကယျြ ဒေါသထှကျပွီး ပွောလိုကျတယျ၊ " လာကွစမျး၊ ဒီ 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ လေးကောငျကို ဆှဲထုတျသှားပွီး သတျပဈကွစမျး " ။
ဒီလူလေးယောကျဟာ ဓားစာခံအဖွဈနဲ့ အသတျခံလိုကျရတယျ။
နောကျတော့ ပွောသံကွားတာက လူသတျသမား အစဈက " ခငျြ " နိုငျငံကလူဖွဈပွီး၊ အစောကွီးကတညျးက " ခငျြ " နိုငျငံကို ထှကျပွေးသှားပွီ။
二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ဆိုတဲ့ ဒီဝေါဟာရဟာ ဒီလိုမြိုးပျေါပေါကျလာတာလို့ ဆိုစမှတျပွုကွတယျ၊ လူတှကေ နောကျပွောငျကွတဲ့အခါ အမွဲတမျး အဲဒါကိုသုံးပွီး " ငနုံ၊ ငတုံး၊ ငအ " စသညျဖွငျ့ ဖျောပွကွပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အဲဒါက သူမြားကို ဆဲဆိုတဲ့စကား မဟုတျပါဘူး။
အခု၊ " 二 èr ၂ " စာလုံး တဈလုံးတညျးမှာလညျး အဲဒီလို အဓိပ်ပာယျမြိုး ရှိပါတယျ၊ ဥပမာ- " 你 怎 么 那 么 二 啊 မငျး ဘာလို့ ဒီလောကျတုံးရတာလဲ ” ဆိုတာဟာ " 你 怎 么 那 么 傻 啊 မငျး ဘာလို့ ဒီလောကျတုံးရတာလဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုးပဲပေါ့။
2. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
3. 个〔ge〕... ယောကျ
7. 不是...而是〔búshì...érshì〕မ ... ဟုတျဘဲ၊ ... ဟုတျတယျ
9. 傻瓜〔shǎguā〕ငတုံး။ ငနုံ။ ငအ
14. 传说〔chuánshuō〕တဆငျ့စကားပွောသညျ။ ပါးစပျရာဇဝငျ။ ရိုးရာပုံပွငျ
15. 战国〔zhànguó〕" ကနျြ့ " နိုငျငံ ( BC-475 မှ BC-221 ထိ )
20. 叫〔jiào〕 ချေါသညျ
22. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
23. 齐国〔qíguó〕" ခြီ " နိုငျငံ ( BC-1066 မှ BC-256 ထိ 周 မငျးဆကျခတျေမှ ပွညျထောငျတဈခု )
24. 被〔bèi〕... ခံရခွငျး
26. 了〔le〕... ခဲ့တယျ။ ပွီးပွီ
27. 齐王〔qíwáng〕" ခြီ " နိုငျငံ ဘုရငျ
30. 想要〔xiǎngyào〕... ခငျြသညျ
31. 为〔wèi〕... အတှကျ
33. 一时〔yìshí〕အခြိနျတိုလေး။ ယာယီ
34. 又〔yòu〕လညျးပဲ။ နောကျထပျ
35. 找不到〔zhǎo búdào〕ရှာမတှပေ့ါ
37. 于是〔yúshì〕သို့ဖွဈ၍။ ဤသို့အားဖွငျ့
41. 让〔ràng〕... စသေညျ။ ... ခိုငျးသညျ
43. 头〔tóu〕 ခေါငျး
44. 割下来〔gē xiàlái〕 ဖွတျလိုကျသညျ
48. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
49. 写道〔xiědào〕 ရေးသားသညျ
50. 内奸〔nèijiān〕အတှငျးသူလြှို။ အသားထဲက လောကျကောငျ
51. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
54. 两〔liǎng〕တရုတျအောငျစ ( ဂရမျ ငါးဆယျနှငျ့ ညီမြှသညျ )
55. 黄金〔huángjīn〕 ရှေ။ ရှဝေါ
57. 就〔jiù〕... သာလြှငျ
58. 四个〔sìge〕 လေးယောကျ
59. 来到〔láidào〕 ရောကျလာသညျ
60. 面前〔miànqián〕 ရှမှေ့ောကျ
62. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
63. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
64. 的〔de〕... ခဲ့တယျ
65. 问〔wèn〕 မေးသညျ
69. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
71. 中计〔zhòngjì〕 ထောငျခြောကျထဲ သကျဆငျးမိသညျ
72. 还〔hái〕... သေးသညျ
73. 高兴地〔gāoxìng de〕ဝမျးသာစှာ
74. 回答〔huídá〕 ပွနျဖွသေညျ
75. 大怒〔dànù〕အကွီးအကယျြ ဒေါသထှကျသညျ
76. 道〔dào〕 ပွောဆိုသညျ။ ပွောသညျ
79. 推出去〔tuū chūqù〕ဆှဲထုတျသှားသညျ
80. 成〔chéng〕 ဖွဈသညျ
82. 而〔ér〕 ပွီး
83. 真正〔zhēnzhèng〕အစဈ။ အစဈအမှနျ
84. 据说〔jùshuō〕 ပွောသံကွားရသညျ။ ... သတဲ့
85. 秦国〔qínguó〕" ခငျြ " နိုငျငံ ( BC-221 မှ BC-206 ထိ )
86. 早就〔zǎojiù〕အစောကွီး ကတညျးက
87. 逃〔táo〕တိမျးရှောငျသညျ။ ပွေးသညျ
88. 回〔huí〕 ပွနျသညျ
91. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ
92. 就〔jiù〕... ပဲ။ ပဲပေါ့
95. 下来〔xiàlái〕... လာသညျ
98. 在〔zài〕... မှာ
99. 开玩笑〔kāiwánxiào〕 နောကျပွောငျသညျ
100. 的时候〔de shíhòu〕... တဲ့အခါမှာ
104. 形容〔xíngróng〕 ဖျောပွသညျ
107. 骂人〔mà rén〕လူကို ဆဲသညျ
110. 单单〔dāndan〕... သာလြှငျ
111. 二〔èr〕 နှဈ ( ၂ )
113. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
119. 就是〔jiùshì〕... ပဲပေါ့
120. 傻〔shǎ〕 နုံသညျ။ အသညျ။ တုံးသညျ
10:11 PM C-Text , Chinese
တရုတ်ပြည်မှာ ရာသီဥတု လေးမျိုးရှိတဲ့အထဲက နွေဦးရာသီဟာ အရမ်း သာယာကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလွန်းပါတယ်။
春天到了 chūntiān dàole
春 天 到 了 ，天 气 渐 渐 暖 和 了 。
နွေဦးရာသီ ရောက်ပြီ၊ ရာသီဥတုက တဖြည်းဖြည်း နွေးထွေးလာပြီ။
公 园 里 ，各 种 花 都 开 了 ，红 的 、绿 的 、黄 的 …… 真 好 看 。
ပန်းခြံထဲမှာ ပန်းအမျိုးမျိုး ပွင့်နေကြတယ်၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အဝါ ..... အရမ်း ကြည့်ကောင်းတယ်။
马 路 旁 边 的 树 叶 变 成 了 绿 色 。
လမ်းမဘေးဘက်က သစ်ရွက်တွေလည်း အစိမ်းရောင် ပြောင်းသွားကြပြီ။
太 阳 很 好 ，阳 光 很 暖 和 ，气 温 不 高 也 不 低 ，真 是 旅 游 的 好 季 节 。
နေမင်းကြီးက အရမ်းသာယာတယ်၊ နေရောင်ခြည်က အရမ်းနွေးထွေးတယ်၊ အပူချိန်က မြင့်လည်း မမြင့်၊ နိမ့်လည်း မနိမ့်ဘူး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သွားစရာကောင်းလှတဲ့ အချိန်ရာသီပါပဲ။
孩 子 们 非 常 高 兴 ，他 们 穿 着 漂 亮 的 衣 服 出 去 玩 ，有 的 在 公 园 里 看 花 ，有 的 去 参 观 博 物 馆 ，有 的 去 动 园 看 动 物 ，还 有 的 去 书 店 买 有 意 义 的 书 …… 。
ကလေးတွေက အရမ်း ပျော်ကြတယ်၊ သူတို့က လှပတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ထားပြီး လျှောက်လည်ကြတယ်၊ တချို့က ပန်းခြံထဲမှာ ပန်းတွေကြည့်ကြတယ်၊ တချို့က ပြတိုက်ကို သွားလည်ကြတယ်၊ တချို့က စာအုပ်ဆိုင် သွားပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ ဝယ်ကြသေးတယ်။
他 们 喜 欢 春 天 ，他 们 在 春 天 里 玩 得 高 兴 极 了 。
သူတို့က နွေဦးရာသီကို သဘောကျတယ်၊ သူတို့က နွေဦးရာသီမှာ လည်ပတ်ရတာကို အရမ်း ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။
1. 春天〔chūntiān〕 နွေဦးရာသီ
2. 到〔dào〕 ရောက်သည်
3. 了〔le〕... ပြီ။ ခဲ့တယ်
6. 暖和〔nuǎnhuo〕 နွေးထွေးသည်
8. 里〔lǐ〕အထဲ။ ထဲ
19. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်
20. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က
22. 变成〔biànchéng〕... အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်
24. 太阳〔tàiyáng〕 နေ။ နေမင်း
26. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
27. 阳光〔yángguāng〕 နေရောင်ခြည်
30. 高〔gāo〕 မြင့်သော
31. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ
33. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
34. 旅游〔lǚyóu〕ကမ္ဘာလှည့်ခရီး ထွက်သည်
35. 季节〔jìjié〕ရာသီ။ ဥတု
41. 着〔zhe〕... နေသည်။ ထားသည်
43. 衣服〔yīfu〕အင်္ကျီ။ အဝတ်အစား
44. 出去玩〔chūqùwán〕 လျှောက်လည်သည်
45. 有的〔yǒude〕တချို့။ အချို့
46. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်
49. 博物馆〔bówùguǎn〕 ပြတိုက်
52. 还〔hái〕... သေးသည်
59. 玩〔wán〕လည်ပတ်သည်။ ကစားသည်
61 ...极了〔...jíle〕... လွန်းသည်
တရုတျပွညျမှာ ရာသီဥတု လေးမြိုးရှိတဲ့အထဲက နှဦေးရာသီဟာ အရမျး သာယာကွညျနူးဖှယျ ကောငျးလှနျးပါတယျ။
နှဦေးရာသီ ရောကျပွီ၊ ရာသီဥတုက တဖွညျးဖွညျး နှေးထှေးလာပွီ။
ပနျးခွံထဲမှာ ပနျးအမြိုးမြိုး ပှငျ့နကွေတယျ၊ အနီ၊ အစိမျး၊ အဝါ ..... အရမျး ကွညျ့ကောငျးတယျ။
လမျးမဘေးဘကျက သဈရှကျတှလေညျး အစိမျးရောငျ ပွောငျးသှားကွပွီ။
နမေငျးကွီးက အရမျးသာယာတယျ၊ နရေောငျခွညျက အရမျးနှေးထှေးတယျ၊ အပူခြိနျက မွငျ့လညျး မမွငျ့၊ နိမျ့လညျး မနိမျ့ဘူး၊ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီး သှားစရာကောငျးလှတဲ့ အခြိနျရာသီပါပဲ။
ကလေးတှကေ အရမျး ပြျောကွတယျ၊ သူတို့က လှပတဲ့ အဝတျအစားတှေ ဝတျထားပွီး လြှောကျလညျကွတယျ၊ တခြို့က ပနျးခွံထဲမှာ ပနျးတှကွေညျ့ကွတယျ၊ တခြို့က ပွတိုကျကို သှားလညျကွတယျ၊ တခြို့က စာအုပျဆိုငျ သှားပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ စာအုပျတှေ ဝယျကွသေးတယျ။
သူတို့က နှဦေးရာသီကို သဘောကတြယျ၊ သူတို့က နှဦေးရာသီမှာ လညျပတျရတာကို အရမျး ပြျောရှငျကွပါတယျ။
1. 春天〔chūntiān〕 နှဦေးရာသီ
2. 到〔dào〕 ရောကျသညျ
3. 了〔le〕... ပွီ။ ခဲ့တယျ
6. 暖和〔nuǎnhuo〕 နှေးထှေးသညျ
19. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘကျ
20. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော။ က
22. 变成〔biànchéng〕... အဖွဈ ပွောငျးလဲသညျ
24. 太阳〔tàiyáng〕 နေ။ နမေငျး
26. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
27. 阳光〔yángguāng〕 နရေောငျခွညျ
30. 高〔gāo〕 မွငျ့သော
31. 也〔yě〕လညျး။ လညျးပဲ
33. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
34. 旅游〔lǚyóu〕ကမ်ဘာလှညျ့ခရီး ထှကျသညျ
41. 着〔zhe〕... နသေညျ။ ထားသညျ
43. 衣服〔yīfu〕အကငြ်္ီ။ အဝတျအစား
44. 出去玩〔chūqùwán〕 လြှောကျလညျသညျ
45. 有的〔yǒude〕တခြို့။ အခြို့
46. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသညျ
49. 博物馆〔bówùguǎn〕 ပွတိုကျ
52. 还〔hái〕... သေးသညျ
59. 玩〔wán〕လညျပတျသညျ။ ကစားသညျ
61 ...极了〔...jíle〕... လှနျးသညျ
Source: Speed-up Chinese (book-2)
9:50 PM C-Joke , Chinese
တချို့က ဆေးထိုးကြမ်းတယ်နော်။ ဒီဟာသဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။
洒 把 吧 台 上 的 一 部 手 机 响 了 ，一 个 男 子 接 了 起 来 。
အရက်ဘားကောင်တာပေါ်က ဟန်းဖုန်းတစ်လုံး မြည်လာတော့၊ အမျိုးသားတစ်ယောက်က ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ်။
“ 喂 ？”
“ 老 公 ，我 看 到 了 一 个 包 包 ，现 在 打 折 ，只 要 四 万 五 ～ ”
" ကျားကျားရေ၊ ကျွန်မ အိတ်တစ်လုံး တွေ့ထားတယ်၊ အခု discount နဲ့ ပေးနေတယ်၊ လေးသောင်းခွဲတည်းပါ ... "
“ 买 。”
" ဝယ်စေဗျာ "
“ 我 还 看 到 一 个 钴 戒 ，下 周 就 是 我 们 结 婚 纪 念 日 了 ，你 说 过 要 送 我 一 个 礼 物 的 。”
" ကျွန်မ စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်း တွေ့ထားသေးတယ်၊ နောက်တစ်ပါတ်ဆို ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ ရောက်ပြီနော်၊ ကျွန်မကို လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးမယ်လို့ ရှင်ပြောထားတယ်လေ "
“ 买 ，你 开 心 就 好 。”
" ဝယ်ပေါ့၊ မင်း စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးတာပဲ "
“ 刚 才 中 介 打 电 话 说 ，我 们 看 中 的 市 中 心 的 一 套 房 子 降 价 了 ，下 周 之 前 买 只 要 八 百 万 。”
" ခုနက ပွဲစားက ဖုန်းဆက်ပြောတယ်၊ ကျွန်မတို့ မျက်စိကျနေတဲ့ မြို့လယ်ခေါင်က အိမ်လေးက ဈေးကျသွားပြီ၊ နောက်တစ်ပတ်မတိုင်ခင် ဝယ်ရင် သိန်းရှစ်ဆယ်နဲ့ ရမယ် ... တဲ့ "
“ 这 么 便 宜 ？买 。”
" ဒီလောက် ဈေးပေါတာ၊ ဝယ်ပေါ့ "
“ 谢 谢 老 公 ，你 最 好 了 。”
" ကျေးဇူးနော်၊ ကျားကျား၊ ရှင်က အရမ်း သဘောကောင်းတာပဲ "
男 子 挂 断 电 话 ，然 后 大 声 问 道 ：“ 这 是 谁 的 手 机 ？”
အမျိုးသားက ဖုန်းချပြီးနောက်၊ အကျယ်ကြီး အော်မေးလိုက်တယ် " ဒါ ဘယ်သူ့ဟန်းဖုန်းလဲ " ။
4. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က
8. 了〔le〕... ခဲ့တယ်။ ပြီးပြီ
10. 男子〔nánzi〕အမျိုးသား။ ယောင်္ကျား
11. 接〔jiē〕(ဖုန်း) ကိုင်သည်
12. 起来〔qǐlái〕... လိုက်တယ်
14. 老公〔lǎogōng〕ကျားကျား ( လင်ယောင်္ကျားကို ချစ်စနိုးခေါ်ခြင်း )
15. 我〔wǒ〕ငါ။ ကျွန်တော်။ ကျွန်မ
16. 看到〔kàndào〕 တွေ့ရသည်
20. 打折〔dǎzhé〕discount ပေးသည်
21. 只〔zhǐ〕... သာလျှင်။ ပဲ
22. 四万五〔sì wàn wǔ〕 လေးသောင်းခွဲ
24. 还〔hái〕... သေးတယ်
26. 下周〔xiàzhōu〕 နောက်တစ်ပါတ်
28. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်
32. 你〔nǐ〕နင်။ မင်း။ ခင်ဗျား။ ရှင်
33. 说〔shuō〕 ပြောသည်
34. 过〔guo〕... ဖူးသည်
35. 要〔yào〕... မယ်
38. 的〔de〕... ခဲ့တယ်
40. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
43. 打电话〔dǎ diànhuà〕ဖုန်းဆက်သည်
44. 看中〔kànzhòng〕သဘောကျသည်။ လိုချင်သည်။ မျက်စိကျသည်
45. 一套〔yítào〕တစ်လုံး။ တစ်အိမ်
47. 降价〔jiàngjià〕 ဈေးကျသည်
48. 之前〔zhīqián〕... မတိုင်ခင်
49. 八百万〔bā bǎi wàn〕သိန်းရှစ်ဆယ်
51. 便宜〔piányi〕 ဈေးပေါသော
52. 谢谢〔xièxie〕 ကျေးဇူးပါ
53. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
56. 然后〔ránhòu〕 နောက်ပြီးတော့
58. 问道〔wèndào〕 မေးမြန်းသည်
59. 这〔zhè〕ဒါ။ ဒီဟာ
တခြို့က ဆေးထိုးကွမျးတယျနျော။ ဒီဟာသဇာတျလမျးလေးကို ဖတျကွညျ့ရငျ သိပါလိမျ့မယျ။
အရကျဘားကောငျတာပျေါက ဟနျးဖုနျးတဈလုံး မွညျလာတော့၊ အမြိုးသားတဈယောကျက ဖုနျးကိုငျလိုကျတယျ။
" ဟယျလို "
" ကြားကြားရေ၊ ကြှနျမ အိတျတဈလုံး တှထေ့ားတယျ၊ အခု discount နဲ့ ပေးနတေယျ၊ လေးသောငျးခှဲတညျးပါ ... "
" ဝယျစဗြော "
" ကြှနျမ စိနျလကျစှပျတဈကှငျး တှထေ့ားသေးတယျ၊ နောကျတဈပါတျဆို ကြှနျမတို့ မင်ျဂလာနှဈပတျလညျနေ့ ရောကျပွီနျော၊ ကြှနျမကို လကျဆောငျတဈခု ပေးမယျလို့ ရှငျပွောထားတယျလေ "
" ဝယျပေါ့၊ မငျး စိတျခမျြးသာရငျ ပွီးတာပဲ "
" ခုနက ပှဲစားက ဖုနျးဆကျပွောတယျ၊ ကြှနျမတို့ မကျြစိကနြတေဲ့ မွို့လယျခေါငျက အိမျလေးက ဈေးကသြှားပွီ၊ နောကျတဈပတျမတိုငျခငျ ဝယျရငျ သိနျးရှဈဆယျနဲ့ ရမယျ ... တဲ့ "
" ဒီလောကျ ဈေးပေါတာ၊ ဝယျပေါ့ "
" ကြေးဇူးနျော၊ ကြားကြား၊ ရှငျက အရမျး သဘောကောငျးတာပဲ "
အမြိုးသားက ဖုနျးခပြွီးနောကျ၊ အကယျြကွီး အျောမေးလိုကျတယျ " ဒါ ဘယျသူ့ဟနျးဖုနျးလဲ " ။
4. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ က
8. 了〔le〕... ခဲ့တယျ။ ပွီးပွီ
10. 男子〔nánzi〕အမြိုးသား။ ယောကငြ်္ား
11. 接〔jiē〕(ဖုနျး) ကိုငျသညျ
12. 起来〔qǐlái〕... လိုကျတယျ
14. 老公〔lǎogōng〕ကြားကြား ( လငျယောကငြ်္ားကို ခဈြစနိုးချေါခွငျး )
15. 我〔wǒ〕ငါ။ ကြှနျတျော။ ကြှနျမ
16. 看到〔kàndào〕 တှရေ့သညျ
20. 打折〔dǎzhé〕discount ပေးသညျ
21. 只〔zhǐ〕... သာလြှငျ။ ပဲ
22. 四万五〔sì wàn wǔ〕 လေးသောငျးခှဲ
24. 还〔hái〕... သေးတယျ
26. 下周〔xiàzhōu〕 နောကျတဈပါတျ
28. 是〔shì〕ဟုတျသညျ။ ဖွဈသညျ
32. 你〔nǐ〕နငျ။ မငျး။ ခငျဗြား။ ရှငျ
33. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
34. 过〔guo〕... ဖူးသညျ
35. 要〔yào〕... မယျ
38. 的〔de〕... ခဲ့တယျ
40. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
43. 打电话〔dǎ diànhuà〕ဖုနျးဆကျသညျ
44. 看中〔kànzhòng〕သဘောကသြညျ။ လိုခငျြသညျ။ မကျြစိကသြညျ
45. 一套〔yítào〕တဈလုံး။ တဈအိမျ
47. 降价〔jiàngjià〕 ဈေးကသြညျ
48. 之前〔zhīqián〕... မတိုငျခငျ
49. 八百万〔bā bǎi wàn〕သိနျးရှဈဆယျ
51. 便宜〔piányi〕 ဈေးပေါသော
52. 谢谢〔xièxie〕 ကြေးဇူးပါ
53. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
56. 然后〔ránhòu〕 နောကျပွီးတော့
58. 问道〔wèndào〕 မေးမွနျးသညျ
ဧည့်လမ်းညွှန် အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၂)။
9:21 PM C-News , Chinese
သင် နိုင်ငံခြားဘာသာတစ်မျိုးမျိုး တတ်ကျွမ်းထားပြီး၊ ဧည့်လမ်းညွှန် လုပ်ကိုင်လိုပါက တရားဝင် ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင် ရရှိအောင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော အောက်ပါသင်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း၊ ဧည့်လမ်းညွှန် အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၂)ကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂-ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၉-ရက်နေ့ထိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း တည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် (၃၁) လမ်းထောင့်ရှိ ရသာကွန်ဒို၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု သင်တန်းကျောင်းမှ သိရပါသည်။
★ လျှောက်ထားနိုင်သူများ ★
✔ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ၊
✔ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး၊ ကိုယ်အင်္ဂါ ပြည့်စုံသူ၊
✔ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ဂျာမန်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ထိုင်းဘာသာစကား တစ်ခုခု ကျွမ်းကျင်သူ၊
★ လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ★
✔ ပညာအရည်အချင်း မိတ္တူနှင့် မူရင်း
✔ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက် မူရင်း
✔ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ သုံးပုံ
★ အသေးစိတ် စုံစမ်းရန် ဖုန်းနံပါတ် ★
Source: ကြေးမုံသတင်းစာ (22-08-2016)
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(45) 在
9:06 PM C-Draw , Chinese
တစ်စုံတစ်ခုက တစ်နေရာရာမှာ ရှိတဲ့အကြောင်း တည်နေရာကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ ဒီတရုတ်စာလုံးလေး 在 ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(44) 狗
9:03 PM C-Draw , Chinese
သင့်အိမ်မှာ ခွေး မွေးထားပါသလား။ “ခွေး” ကို တရုတ်လို 狗 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ သင် လေ့ကျင့်ရမယ့် တရုတ်စာလုံးလေးပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(43) 只
8:59 PM C-Draw , Chinese
အကောင်တွေကို တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်...စသည်ဖြင့် ရေတွက်ရာမှာ သုံးတဲ့ မျိုးပြစာလုံးလေးက 只ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးကြည့်ပါအုံးနော်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(42) 有
8:55 PM C-Draw , Chinese
သင့်မှာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ တရုတ်စာလုံး 有 ကို သုံးရပါတယ်။ ရေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(41) 再
8:51 PM C-Draw , Chinese
“နောက်ထပ်၊ ထပ်ပြီး” စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပြောဆိုနိုင်တဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးက 再 ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်း ရေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(40) 虫
8:47 PM C-Draw , Chinese
အင်းဆက်ပိုးကောင်လေးတွေကို တရုတ်လို 虫 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(39) 毛
8:15 PM C-Draw , Chinese
毛 ဆိုတာ မြန်မာလို “အမွေးအမှင်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
စာလုံးတို့၏ လေးနက်မှု (စာလုံးထဲက ပညာ-၃)။
2:59 AM C-Knowledge , Chinese
「字的尊嚴」字慧(三) စာလုံးတို့၏ လေးနက်မှု (စာလုံးထဲက ပညာ-၃)။
智慧 Zhìhuì ဉာဏ်ပညာ
တရုတ်စာလုံးတို့၏ ကြွယ်ဝလှသော အတွင်းသဘောတို့သည် ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်မတန်ကျယ်ပြောလှသော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုခရီးလေးကို စိတ်ကြိုက်လည်ပတ်ရင်း ဉာဏ်ရည်အဆင့်မြင့်လာစေသလို ဉာဏ်အလင်းလဲ ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
智慧 Zhìhuì ဉာဏ်ပညာ ဆိုတဲ့ စာလုံးနှစ်လုံးပဲ ကြည့်ပါ။
知 Zhī ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သိမြင်နိုင်ခြင်းဟာ 日 Rì နေမင်းအလင်းရောင်မှာလို ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်ခြင်းပါ။ (知+日)=智 ။ နေရောင်သည် အမှောင်မိုက်ကိုခွင်း အလင်းကိုဆောင်သည် မဟုတ်ပါလား။
ထိုကဲ့သို့ သိမြင်ခြင်းမှာ ပုံရိပ်မဲ့တံမြက်စည်း 扫 帚 Sàozhǒu လိုပါပဲ။
彗 Huì စာလုံးမှာ နာမ်အနေနှင့်သုံးလျှင် တံမြက်စည်းပါ ( ပုံတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် )။
ကြိယာအနေနှင့် သုံးတော့ တံမြက်စည်းလှည်းသုတ်သင်သည်ပေါ့။
တံမြက်လှည်း သန့်စင်မယ် 彗 ။ ဘာကိုလဲဆိုတော့ 心 Xīn စိတ်ထဲက အညစ်အကြေး၊ အဆိပ်အတောက်တွေကိုပေါ့။
နေရောင်ထဲမှာလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ပြီး (知+ 日)=智 စိတ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှာပီးသားစိတ် 慧 ကသာ 智慧 Zhìhuì ဉာဏ်ပညာအစစ်မှန် မဟုတ်ပါလား။
မူရင်းရေးသားသူ။ 作者：蘇金國(ဆရာရွှေပြည်မြသိန်း)( ခေတ္တထိုင်ဝမ်)
ဘာသာပြန်ရေးသားသူ။ 楊英和( နေလင်းဦး)
「字的尊嚴」字慧(三) စာလုံးတို့၏ လေးနကျမှု (စာလုံးထဲက ပညာ-၃)။
智慧 Zhìhuì ဉာဏျပညာ
တရုတျစာလုံးတို့၏ ကွှယျဝလှသော အတှငျးသဘောတို့သညျ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အငျမတနျကယျြပွောလှသော စဉျးစားတှေးချေါမှုမြားကို ဖွဈစနေိုငျပါသညျ။
စဉျးစားတှေးချေါမှုခရီးလေးကို စိတျကွိုကျလညျပတျရငျး ဉာဏျရညျအဆငျ့မွငျ့လာစသေလို ဉာဏျအလငျးလဲ ဖှငျ့ပေးနိုငျပါတယျ။
智慧 Zhìhuì ဉာဏျပညာ ဆိုတဲ့ စာလုံးနှဈလုံးပဲ ကွညျ့ပါ။
知 Zhī ဆိုတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ သိမွငျနိုငျခွငျးဟာ 日 Rì နမေငျးအလငျးရောငျမှာလို ထငျထငျရှားရှား သိမွငျခွငျးပါ။ (知+日)=智 ။ နရေောငျသညျ အမှောငျမိုကျကိုခှငျး အလငျးကိုဆောငျသညျ မဟုတျပါလား။
ထိုကဲ့သို့ သိမွငျခွငျးမှာ ပုံရိပျမဲ့တံမွကျစညျး 扫 帚 Sàozhǒu လိုပါပဲ။
彗 Huì စာလုံးမှာ နာမျအနနှေငျ့သုံးလြှငျ တံမွကျစညျးပါ ( ပုံတှငျတှနေို့ငျပါသညျ )။
ကွိယာအနနှေငျ့ သုံးတော့ တံမွကျစညျးလှညျးသုတျသငျသညျပေါ့။
တံမွကျလှညျး သနျ့စငျမယျ 彗 ။ ဘာကိုလဲဆိုတော့ 心 Xīn စိတျထဲက အညဈအကွေး၊ အဆိပျအတောကျတှကေိုပေါ့။
နရေောငျထဲမှာလို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိမွငျပွီး (知+ 日)=智 စိတျထဲက အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှာပီးသားစိတျ 慧 ကသာ 智慧 Zhìhuì ဉာဏျပညာအစဈမှနျ မဟုတျပါလား။
မူရငျးရေးသားသူ။ 作者：蘇金國(ဆရာရှပွေညျမွသိနျး)( ခတ်ေတထိုငျဝမျ)
ဘာသာပွနျရေးသားသူ။ 楊英和( နလေငျးဦး)
Credit - 楊英和( နေလင်းဦး)
စာလုံးတို့၏ လေးနက်မှု (စာလုံးထဲက ပညာ)-၂။
2:28 AM C-Knowledge , Chinese
「字的尊嚴」字慧(二) စာလုံးတို့၏ လေးနက်မှု (စာလုံးထဲက ပညာ)၂။
တရုတ်စာလုံးတို့သည် သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးသော စာလုံးများ ဖြစ်ကြသည်။
မှတ်မိသလောက် အရင်နှစ်တော်ကြာက သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးတယ်။
ကုလသမဂ္ဂမှာ တင်သွင်းတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်တာလေး။
လူသားဆိုင်ရာပညာရပ် ပညာရှင်တစ်ယောက် နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ပြီး အဘက်ဘက်သုံးသပ်ပြီးနောက်မှာ ခိုင်မာတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခု ရေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။
လူသားတွေ အစောဆုံးငွေကြေးက “貝殼 Bèiké ခရုခွံ” တဲ့။
အဲ့တော့ ကျွန်တော် တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။
“買賣 Mǎimài အရောင်းအ၀ယ်” ဆိုတဲ့စာလုံးက “貝 Bèi ခရုလေး” နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါလား။
ရှေးတို့ဘိုးဘေးတွေ စာလုံးမှာက ပြောပြထားပြီးသား 貝 ခရုခွံနဲ့ ရောင်းဝယ်တယ်ဆိုတာလေ။
ဒါဆို စာလုံးဆိုတာ သမိုင်းရဲ့သက်သေ တစ်ခုပဲပေါ့။ အရောင်းအ၀ယ်တင် မကပါဘူး။
ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြန်တဲ့ စာလုံးတွေမှာလဲ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ကြည့်ရအောင်။
ကျွန်တော့်အထင် 貝 ခရုခွံ ငွေကြေးလဲ ပိုင်ဆိုင်မယ်။
ပြီးရင် “才干 Cáigàn အရည်အချင်း” လဲရှိမယ်ဆို အဲ့လိုမှ “財富 Cái'fù ငွေကြေးဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်း” ဖြစ်တာပေါ့ ( 貝+才=「財」)။
貝 ခရုခွံလေးကို “化作 Huà zuò ပြောင်းလဲစီမံ” တတ်ရင် “貨 Huò ကုန်ပစ္စည်း” ဖြစ်တာပေါ့။
အမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ “今 Jīn လတ်တလော” ရဲ့ 貝 ခရုခွံလေးကို မက်ရင်တော့ “貪 Tān လောဘကြီးသည်” ပေါ့။
貝 ခရုခွံလေးကို စွဲမက်သူ “သူ 者 Zhě ” ဆိုတာ “賭 Dǔ လောင်ကစား” တာပေါ့။
貝 ခရုခွံလေးက “တန်ဖိုးမဲ့ 缺乏Quēfá” တော့ “貶 Biǎn နှိမ်သည်” ။
貝 ခရုခွံလေးကို “有 Yǒu ပိုင်ဆိုင်လိုမယ်” ၊ “各 Gè ကိုယ်စီ” အကျိုးအမြတ်အတွက် စဉ်းစားလုပ်မယ်ဆိုတော့“賄賂 Huìlù လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု” ပေါ့။
“ချီးမြှင့်သည် 賞賜 Shǎngcì” ဆိုလဲ 貝 ခရုခွံလေးပါတာပဲလေ။
“ လျော်ရတော့မယ် 賠 Péi” ဆိုလဲ 貝 ခရုခွံလေးပဲ။
ဟော မြတ်ပီဟေ့ဆိုလဲ “賺 Zhuàn မြတ်သည်” 貝 ခရုခွံလေးနဲ့ပဲပေါ့။
ဒါတွေဟာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားထွက်လာတာတွေပါ။
ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့တင် လေးနက်နေရင် တို့တွေဟာ စာလုံးတို့တန်ဖိုးဂုဏ်ကို ပိုမထိန်းသိမ်းသင့်ပေဘူးလား။
အလွယ်မက်ပြီး စာလုံးတွေ စုတ်ချက်လျှော့ပစ်တော့ ဘိုးဘေးတွေကို စော်ကားရာကျမှာပေါ့။
「字的尊嚴」字慧(二) စာလုံးတို့၏ လေးနကျမှု (စာလုံးထဲက ပညာ)၂။
တရုတျစာလုံးတို့သညျ သမိုငျးတနျဖိုးကွီးသော စာလုံးမြား ဖွဈကွသညျ။
မှတျမိသလောကျ အရငျနှဈတျောကွာက သတငျးတဈပုဒျဖတျဖူးတယျ။
ကုလသမဂ်ဂမှာ တငျသှငျးတဲ့ ပညာရပျဆိုငျရာ စာတမျးဖတျတာလေး။
လူသားဆိုငျရာပညာရပျ ပညာရှငျတဈယောကျ နှဈပေါငျးမြားစှာလလေ့ာခဲ့ပွီး အဘကျဘကျသုံးသပျပွီးနောကျမှာ ခိုငျမာတဲ့ကောကျခကျြတဈခု ရေးထုတျလိုကျပါတယျ။
လူသားတှေ အစောဆုံးငှကွေေးက “貝殼 Bèiké ခရုခှံ” တဲ့။
အဲ့တော့ ကြှနျတျော တဈခုစဉျးစားမိတယျ။
“買賣 Mǎimài အရောငျးအဝယျ” ဆိုတဲ့စာလုံးက “貝 Bèi ခရုလေး” နဲ့ တညျဆောကျထားတာပါလား။
ရှေးတို့ဘိုးဘေးတှေ စာလုံးမှာက ပွောပွထားပွီးသား 貝 ခရုခှံနဲ့ ရောငျးဝယျတယျဆိုတာလေ။
ဒါဆို စာလုံးဆိုတာ သမိုငျးရဲ့သကျသေ တဈခုပဲပေါ့။ အရောငျးအဝယျတငျ မကပါဘူး။
ငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွနျတဲ့ စာလုံးတှမှောလဲ တှရေ့လရှေိ့တယျ။ ကွညျ့ရအောငျ။
ကြှနျတေျာ့အထငျ 貝 ခရုခှံ ငှကွေေးလဲ ပိုငျဆိုငျမယျ။
ပွီးရငျ “才干 Cáigàn အရညျအခငျြး” လဲရှိမယျဆို အဲ့လိုမှ “財富 Cái'fù ငှကွေေးဥစ်စာကွှယျဝခွငျး” ဖွဈတာပေါ့ ( 貝+才=「財」)။
貝 ခရုခှံလေးကို “化作 Huà zuò ပွောငျးလဲစီမံ” တတျရငျ “貨 Huò ကုနျပစ်စညျး” ဖွဈတာပေါ့။
အမွငျကဉျြးကဉျြးနဲ့ “今 Jīn လတျတလော” ရဲ့ 貝 ခရုခှံလေးကို မကျရငျတော့ “貪 Tān လောဘကွီးသညျ” ပေါ့။
貝 ခရုခှံလေးကို စှဲမကျသူ “သူ 者 Zhě ” ဆိုတာ “賭 Dǔ လောငျကစား” တာပေါ့။
貝 ခရုခှံလေးက “တနျဖိုးမဲ့ 缺乏Quēfá” တော့ “貶 Biǎn နှိမျသညျ” ။
貝 ခရုခှံလေးကို “有 Yǒu ပိုငျဆိုငျလိုမယျ” ၊ “各 Gè ကိုယျစီ” အကြိုးအမွတျအတှကျ စဉျးစားလုပျမယျဆိုတော့“賄賂 Huìlù လာဘျပေးလာဘျယူမှု” ပေါ့။
“ခြီးမွှငျ့သညျ 賞賜 Shǎngcì” ဆိုလဲ 貝 ခရုခှံလေးပါတာပဲလေ။
“လြျောရတော့မယျ 賠 Péi” ဆိုလဲ 貝 ခရုခှံလေးပဲ။
ဟော မွတျပီဟဆေို့လဲ “賺 Zhuàn မွတျသညျ” 貝 ခရုခှံလေးနဲ့ပဲပေါ့။
ဒါတှဟော တိုကျရိုကျကွညျ့ပွီး စဉျးစားထှကျလာတာတှပေါ။
ဒီလိုမြိုးလေးနဲ့တငျ လေးနကျနရေငျ တို့တှဟော စာလုံးတို့တနျဖိုးဂုဏျကို ပိုမထိနျးသိမျးသငျ့ပဘေူးလား။
အလှယျမကျပွီး စာလုံးတှေ စုတျခကျြလြှော့ပဈတော့ ဘိုးဘေးတှကေို စျောကားရာကမြှာပေါ့။
Credit - 楊英和 ( နေလင်းဦး)
သင် လူချောတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသလား။
1:38 AM C-Text , Chinese
အရပ်မြင့်မြင့်၊ ရုပ်ရည်ချောမောပြီး၊ ပိုက်ဆံလည်း ချမ်းသာတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကို တရုတ်လို ဗန်းစကားနဲ့ဆိုရင် 高富帅 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုခေါ်ရတာလဲ။
高 富 帅 是 一 个 现 在 流 行 的 网 络 词 语 ，" 高 " 就 是 长 得 高 ，" 富 " 就 是 有 钱 ，" 帅 " 就 是 长 得 帅 的 意 思 。
Gao Fu Shuai - 高富帅 ဆိုတာဟာ အခု ရေပန်းစားနေတဲ့ အင်တာနက်ဝေါဟာရ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ Gao-高 ဆိုတာ အရပ်မြင့်တာပါ၊ Fu-富 က ပိုက်ဆံရှိတာ၊ Shuai-帅 က ချောတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့။
所 以 这 个 词 语 是 形 容 男 人 在 身 材 、相 貌 和 经 济 实 力 上 都 很 完 美 。
ဒါကြောင့် ဒီစကားလုံးက ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်ဟာ အရပ်အမောင်း၊ ရုပ်ရည်နဲ့ စီးပွားရေးအင်အားအပေါ်မှာ အရမ်း ပြီးပြည့်စုံတယ် ဆိုတာကို သရုပ်ဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
每 个 女 人 都 想 嫁 高 富 帅 ，每 个 男 人 都 想 成 为 高 富 帅 。
မိန်းကလေးတိုင်းက Gao Fu Shuai နဲ့ လက်ထပ်ချင်ကြသလို၊ ယောင်္ကျားလေးတိုင်းကလည်း Gao Fu Shuai ဖြစ်ချင်ကြတယ်။
那 什 么 样 的 女 人 最 受 欢 迎 呢 ？
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးက ကမ်းလင့်ကြိုဆိုခြင်းကို အခံရဆုံးလဲ။
当 然 就 是 与 " 高 富 帅 " 对 应 的 女 生 版 本 " 白 富 美 " 啦 。
Gao Fu Shuai နဲ့ လျော်ကန်လိုက်ဖက်တဲ့ မိန်းကလေးကတော့ Bai Fu Mei ပဲပေါ့။
" 白 " 就 是 皮 肤 白 ，看 着 舒 服 ，" 富 " 就 是 有 钱 ，" 美 " 就 是 长 得 漂 亮 、身 材 好 的 意 思 。
Bai-白 ဆိုတာက အသားဖြူတာ၊ Fu-富 ဆိုတာ ပိုက်ဆံရှိတာ၊ Mei-美 ချောမောတာ၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား လှပတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
有 调 查 显 示 ，81.2 % 的 人 感 觉 现 在 很 多 年 轻 人 择 偶 时 喜 欢 选 " 高 富 帅 " 、" 白 富 美 " ，不 喜 欢 选 " 矮 穷 矬 " 。
လေ့လာမှုတွေမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့၊ အခုခေတ် လူငယ်အများစုဟာ ဘဝကြင်ဖော် ရွေးတဲ့အခါမှာ Gao Fu Shuai တို့၊ Bai Fu Mei တို့ကို ရွေးရတာ သဘောကျပြီး၊ Ai Qiong Cuo ကို ရွေးရတာ သဘောမကျကြဘူးလို့ ၈၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေက ထင်မြင်ကြပါတယ်။
" 矮 穷 挫 " 是 " 高 富 帅 " 、" 白 富 美 " 的 反 义 词 ，它 用 来 形 容 男 人 或 者 女 人 又 矮 又 穷 又 丑 。
Ai Qiong Cuo ဆိုတာ Gao Fu Shuai တို့၊ Bai Fu Mei တို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒါက ယောင်္ကျားလေး ဒါမှမဟုတ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ အရပ်လည်းပု၊ ဆင်းလည်းဆင်းရဲပြီး၊ ရုပ်လည်းဆိုးတာကို တင်စားလိုက်တာပါ။
这 个 词 更 多 的 是 用 来 调 侃 自 己 。
ဒီစကားလုံးက မိမိကိုယ်ကို လှောင်ပြောင်အပြစ်တင်ရာမှာ အသုံးများပါတယ်။
你 可 以 这 么 用 ，" 我 们 公 司 有 一 个 白 富 美 ，我 好 喜 欢 她 ，但 是 他 身 边 已 经 有 一 个 高 富 帅 了 。
သင် ဒီလို ပြောလို့ရပါတယ်၊ " ငါတို့ ကုမ္ပဏီမှာ Bai Fu Mei - ဆော်အလန်းလေး တစ်ယောက် ရှိတယ်၊ ငါက သူမကို အရမ်း သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူမနံဘေးမှာ Gao Fu Shuai - ဘဲဖြောင့်ဖြောင့် တစ်ယောက် ရှိနေပြီ။
再 加 上 我 是 个 矮 穷 挫 ，怎 么 配 的 上 她 呢 ？唉 …… " 。
နောက်ပြီးတော့ ငါက Ai Qiong Cuo တစ်ယောက်ဆိုတော့၊ ဘယ်လိုလုပ် သူနဲ့ လိုက်ဖက်မှာလဲ။ ဟင်းးးးးး .......... "
5. 流行〔liúxíng〕 ခေတ်စားသည်
6. 的〔de〕တဲ့။ သော
9. 高〔gāo〕 မြင့်သော
10. 就〔jiù〕.. ပဲ။ ပဲပေါ့
11. 长〔zhǎng 〕ကြီးပြင်းလာခြင်း
12. 得〔de〕... တာ
15. 帅〔shuài〕 ချောသော
20. 男人〔nánrén〕 ယောင်္ကျားလေး
21. 在...上〔zài...shang〕... အပေါ်မှာ
22. 身材〔shēncái〕အရပ်အမောင်း။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်
23. 相貌〔xiàngmào〕ရုပ်ရည်။ ရုပ်အဆင်း
24. 和〔hé〕နဲ့။ နှင့်
29. 完美〔wánměi〕 ပြီးပြည့်စုံသည်
30. 每个〔měige〕... တိုင်း
32. 想〔xiǎng〕... ချင်သည်
33. 嫁〔ji〕ညားသည်။ ပေးစားသည်
34. 成为〔chéngwéi〕 ဖြစ်လာသည်
35. 那〔nà〕ဒါဆိုရင်။ အဲဒါ
37. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
39. 欢迎〔huānyíng〕ခုံမင်စွာလက်ခံသည်။ ကြိုဆိုသည်
41. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
42. 与〔yǔ〕... နှင့်
43. 对应〔duìyìng〕ဆက်စပ်လျော်ညီခြင်း။ သက်ဆိုင်ခြင်း
44. 女生〔nǚshēng〕 ကျောင်းသူ။ မိန်းကလေး
45. 版本〔bǎnběn〕ပုံနှိပ်မူ။ Version
47. 白〔bái〕 ဖြူသော
50. 着〔zhe〕... နေသည်။ ထားသည်
51. 舒服〔shūfu〕သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ ဇိမ်ရှိသည်
54. 好〔hǎo〕 ကောင်းသော
57. 显示〔xiǎnshì〕အထင်းသား ပေါ်လွင်လာသည်
59. 感觉〔gǎnjué〕ခံစားမိသည်။ ယူဆသည်
62. 择偶〔zé ǒu〕ကြင်ဖော်ရွေးသည်
63. 时〔shí〕... တဲ့အခါမှာ
65. 选〔xuǎn〕 ရွေးချယ်သည်
66. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )
67. 矮〔ǎi〕နိမ့်သည်။ ပုသည်
68. 穷〔qióng〕ဆင်းရဲသည်။ မွဲသည်
69. 矬〔cuó〕ပုသည်။ ပုပုအိုင့်အိုင့်
75. 又...又〔yòu...yòu〕... လည်း ... လည်း
77. 词〔cí〕 ဝေါဟာရ
79. 调侃〔tiáokǎn〕 ပြောင်လှောင်သည်
80. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်
81. 你〔nǐ〕မင်း။ ခင်ဗျား။ သင်
82. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်
84. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့
88. 身边〔shēnbiān〕 ဘေးနား
89. 已经〔jīngjì〕... ခဲ့ပြီ
90. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
91. 再〔zài〕 နောက်ထပ်။ ထပ်၍
92. 加上〔jiāshang〕 ဖြည့်ထည့်သည်
94. 配得上〔pèi de shang〕လိုက်ဖက်သည်
95. 唉〔ài〕 အော်
သငျ လူခြောတဈယောကျ ဖွဈပါသလား။
အရပျမွငျ့မွငျ့၊ ရုပျရညျခြောမောပွီး၊ ပိုကျဆံလညျး ခမျြးသာတဲ့ ယောကငြ်္ားလေးတှကေို တရုတျလို ဗနျးစကားနဲ့ဆိုရငျ 高富帅 လို့ ချေါပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုချေါရတာလဲ။
Gao Fu Shuai - 高富帅 ဆိုတာဟာ အခု ရပေနျးစားနတေဲ့ အငျတာနကျဝေါဟာရ တဈခုဖွဈပါတယျ၊ Gao-高 ဆိုတာ အရပျမွငျ့တာပါ၊ Fu-富 က ပိုကျဆံရှိတာ၊ Shuai-帅 က ခြောတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပဲပေါ့။
ဒါကွောငျ့ ဒီစကားလုံးက ယောကငြ်္ားလေး တဈယောကျဟာ အရပျအမောငျး၊ ရုပျရညျနဲ့ စီးပှားရေးအငျအားအပျေါမှာ အရမျး ပွီးပွညျ့စုံတယျ ဆိုတာကို သရုပျဖျောထားတာ ဖွဈပါတယျ။
မိနျးကလေးတိုငျးက Gao Fu Shuai နဲ့ လကျထပျခငျြကွသလို၊ ယောကငြ်္ားလေးတိုငျးကလညျး Gao Fu Shuai ဖွဈခငျြကွတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဘယျလိုမိနျးကလေးမြိုးက ကမျးလငျ့ကွိုဆိုခွငျးကို အခံရဆုံးလဲ။
Gao Fu Shuai နဲ့ လြျောကနျလိုကျဖကျတဲ့ မိနျးကလေးကတော့ Bai Fu Mei ပဲပေါ့။
Bai-白 ဆိုတာက အသားဖွူတာ၊ Fu-富 ဆိုတာ ပိုကျဆံရှိတာ၊ Mei-美 ခြောမောတာ၊ ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစား လှပတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
လလေ့ာမှုတှမှော ဖျောပွထားတာကတော့၊ အခုခတျေ လူငယျအမြားစုဟာ ဘဝကွငျဖျော ရှေးတဲ့အခါမှာ Gao Fu Shuai တို့၊ Bai Fu Mei တို့ကို ရှေးရတာ သဘောကပြွီး၊ Ai Qiong Cuo ကို ရှေးရတာ သဘောမကကြွဘူးလို့ ၈၁.၂ ရာခိုငျနှုနျးသော လူတှကေ ထငျမွငျကွပါတယျ။
Ai Qiong Cuo ဆိုတာ Gao Fu Shuai တို့၊ Bai Fu Mei တို့ရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျစကားလုံး ဖွဈပါတယျ၊ အဲဒါက ယောကငြ်္ားလေး ဒါမှမဟုတျ မိနျးကလေး တဈယောကျဟာ အရပျလညျးပု၊ ဆငျးလညျးဆငျးရဲပွီး၊ ရုပျလညျးဆိုးတာကို တငျစားလိုကျတာပါ။
ဒီစကားလုံးက မိမိကိုယျကို လှောငျပွောငျအပွဈတငျရာမှာ အသုံးမြားပါတယျ။
သငျ ဒီလို ပွောလို့ရပါတယျ၊ " ငါတို့ ကုမ်ပဏီမှာ Bai Fu Mei - ဆျောအလနျးလေး တဈယောကျ ရှိတယျ၊ ငါက သူမကို အရမျး သဘောကတြယျ၊ ဒါပမေယျ့ သူမနံဘေးမှာ Gao Fu Shuai - ဘဲဖွောငျ့ဖွောငျ့ တဈယောကျ ရှိနပွေီ။
နောကျပွီးတော့ ငါက Ai Qiong Cuo တဈယောကျဆိုတော့၊ ဘယျလိုလုပျ သူနဲ့ လိုကျဖကျမှာလဲ။ ဟငျးးးးးး .......... "
5. 流行〔liúxíng〕 ခတျေစားသညျ
6. 的〔de〕တဲ့။ သော
9. 高〔gāo〕 မွငျ့သော
10. 就〔jiù〕.. ပဲ။ ပဲပေါ့
11. 长〔zhǎng 〕ကွီးပွငျးလာခွငျး
15. 帅〔shuài〕 ခြောသော
20. 男人〔nánrén〕 ယောကငြ်္ားလေး
21. 在...上〔zài...shang〕... အပျေါမှာ
22. 身材〔shēncái〕အရပျအမောငျး။ ကိုယျလုံးကိုယျထညျ
23. 相貌〔xiàngmào〕ရုပျရညျ။ ရုပျအဆငျး
24. 和〔hé〕နဲ့။ နှငျ့
29. 完美〔wánměi〕 ပွီးပွညျ့စုံသညျ
30. 每个〔měige〕... တိုငျး
32. 想〔xiǎng〕... ခငျြသညျ
33. 嫁〔ji〕ညားသညျ။ ပေးစားသညျ
34. 成为〔chéngwéi〕 ဖွဈလာသညျ
35. 那〔nà〕ဒါဆိုရငျ။ အဲဒါ
37. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး
39. 欢迎〔huānyíng〕ခုံမငျစှာလကျခံသညျ။ ကွိုဆိုသညျ
41. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့
42. 与〔yǔ〕... နှငျ့
43. 对应〔duìyìng〕ဆကျစပျလြျောညီခွငျး။ သကျဆိုငျခွငျး
44. 女生〔nǚshēng〕 ကြောငျးသူ။ မိနျးကလေး
45. 版本〔bǎnběn〕ပုံနှိပျမူ။ Version
47. 白〔bái〕 ဖွူသော
50. 着〔zhe〕... နသေညျ။ ထားသညျ
51. 舒服〔shūfu〕သကျသောငျ့သကျသာရှိသညျ။ ဇိမျရှိသညျ
54. 好〔hǎo〕 ကောငျးသော
57. 显示〔xiǎnshì〕အထငျးသား ပျေါလှငျလာသညျ
59. 感觉〔gǎnjué〕ခံစားမိသညျ။ ယူဆသညျ
62. 择偶〔zé ǒu〕ကွငျဖျောရှေးသညျ
63. 时〔shí〕... တဲ့အခါမှာ
65. 选〔xuǎn〕 ရှေးခယျြသညျ
66. 不〔bù〕မ ( အငွငျး )
67. 矮〔ǎi〕နိမျ့သညျ။ ပုသညျ
68. 穷〔qióng〕ဆငျးရဲသညျ။ မှဲသညျ
69. 矬〔cuó〕ပုသညျ။ ပုပုအိုငျ့အိုငျ့
75. 又...又〔yòu...yòu〕... လညျး ... လညျး
77. 词〔cí〕 ဝေါဟာရ
79. 调侃〔tiáokǎn〕 ပွောငျလှောငျသညျ
80. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယျတိုငျ
81. 你〔nǐ〕မငျး။ ခငျဗြား။ သငျ
82. 可以〔kěyǐ〕... နိုငျသညျ
84. 我们〔wǒmen〕ငါတို့။ ကြှနျတျောတို့
88. 身边〔shēnbiān〕 ဘေးနား
89. 已经〔jīngjì〕... ခဲ့ပွီ
90. 了〔le〕... ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
91. 再〔zài〕 နောကျထပျ။ ထပျ၍
92. 加上〔jiāshang〕 ဖွညျ့ထညျ့သညျ
94. 配得上〔pèi de shang〕လိုကျဖကျသညျ
95. 唉〔ài〕 အျော
ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေတယ်ဆိုတာ၊ ရွက်သစ်တွေ ဝေဖို့ဖြစ်လ...
သွားသေလိုက် - ဗန်းစကားနဲ့ ဘယ်လိုပြောမလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(38) 回
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(37) 水
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(36) 点
ဟိုဒင်း၊ ဟိုဟာ ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။
ဒုတိယမြောက် အဲလီဇဘက် ဘုရင်မကြီး။
PlayStore မှာ Apk ဒေါင်းကြမယ်။
တရုတ်မိတ် ဟန်းဆက်တစ်လုံး ဝယ်မလို့ပါ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(35) 不
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(34) 雨
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(33) 家
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(32) 的
အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဘယ်တော့များမှ အဆုံးသတ်မှာလဲ‬။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(31) 鸟
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(30) 多
အဝတ်အစား ဝယ်ရတာ သဘောကျတယ်။
သင့်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များ။
ပေကျင်း ဟော်တယ်သို့ တစ်ခေါက်။
သင် မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပါသလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(29) 山
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(28) 你
စာလုံးတို့၏ တန်ဖိုးဂုဏ် (စာလုံးထဲကပညာ)-၁။
HSK စာမေးပွဲ ဖြေမလို့ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့အခါ။
သင် ခရီးထွက်ရတာ ကြိုက်သလား။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(27) 开
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(26) 来
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(25) 花
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(24) 地
မွေးနေ့မှာ ဘာလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(23) 大
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(22) 长
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(21) 中
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(20) 儿
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(19) 车
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(18) 火
小姐 ရှောင်းကျယ် - ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
တရုတ်နာမည်ကျော် ဂန္တဝင်ဝတ္ထု ( ၄ ) ပုဒ်။
ရှဲ့ရှဲ့ - ဆိုတာ ဘယ်ချိန်တွေမှာ ပြောကြတာလဲ။
တရုတ်ကိန်းဂဏန်း ရေးသားနည်း နှစ်မျိုး။
တရုတ် အီဒီယမ် အသုံးအနှုန်းများ။
ဆရာ ချမ်းဇော်ထက်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များ ၀ယ်လို့ရပြီဗ...
နီးဟောင် - လို့ ဘယ်ချိန်တွေမှာ ပြောတာလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(17) 我
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၃ ။